Public Health in Myanmar: ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲ ? ?
ရက်စွဲ။ ၂၆၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂ဝဝ၉
သမီး Forward လုပ်တဲ့ ကမာရွတ်မြို.နယ်အထက(၂)နဝမတန်းကျောင်းသူ မခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည်
အသက်(၁၅) နှစ် ဗဟန်းမြို့နယ် အထူးကုဆေးရုံကြီးတခုမှာ ခွဲစိပ်ကုသမှုခံယူပြီး ၂ ရက်မြောက်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ သတင်းကို ခုအပါတ်ထုတ်သတင်းဂျာနယ် Weekly Eleven News Journal မှာ ဖေဖေဖတ်ရပြီးပြီ။ အဲသည် ကတည်းကဖေဖေခံစားခဲ့တာ ကိုပြောပြချင်တာ။ ခု သမီးဖေဖေ့ဆီ
forward လုပ်လိုက်ကတည်းက အင်္ဂလိပ်လို reply လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ ဖေဖေအားမရလို့ မိခင်ဘာသာနဲ့ စာရေးလိုက်တာပါ။
သည်စာကို အများလဲသိသင့်တယ်လို့။ သမီးဆန္ဒရှိယင် Internet က ဖြန့်ရင်လဲ ဖေဖေသဘောတူ ပါတယ်။ မျှမျှတတပဲ ဖေဖေ့အတွေ့အကြုံနဲ့ ယှဉ်ပြီး သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီး ရေးမယ်။
ခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည်ဟာအဖျားဖျားတာ ၅ ရက်မြောက်မှာဗိုက်နာ(အောင့်)လို.ဆေးရုံပြ၊ဆေးရုံတင်တာ ကစမယ်။ ဖေဖေ့ ဆရာဝန်သက်တမ်း (၃၃)နှစ် အတွင်းမှာသည်နှစ် ဝင်တဲ့တုပ်ကွေး( flu ) မျိုး
လူနာတွေအဖျားနဲ့လာပြရင် မျက်နှာနီခြင်း(flush face)
အဆစ်အမြစ်နာခြင်း၊ရောင်ရမ်းခြင်း(arthritis and arthralgia)
၃-၄ ရက်မြောက်မှာ - ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ဝမ်းသွားခြင်း (abdominal pain and diarrhea) စတဲ့ဝေဒနာတွေနဲ.ရောက်လာကြတယ်။
ခုလူနာမှာလဲ အဖျား၊ဗိုက်နာစတဲ့ ဝေဒနာတွေဟာ ခုဖြစ်နေတဲ့ ( flu ) များ လားလို့တော့ဖေဖေ သံသယရှိတယ်။ တပ်အပ်တော့မပြောနိုင်ပါ။ ခွဲစိပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးက အတွေ့အကြုံရင့်
သူ့အတွေ့အကြုံနဲ့ ခွဲစိပ်ရမယ့်လူနာဖြစ်လို့ ခွဲတာ သူ့မှာအပြစ်မရှိပါ။
လူနာတယောက်ခွဲတယ်ဆိုတာ လက်သင်များလို လက်ယားလို့မဟုတ်ပါ။ ဒီ Caseကတော့
ဆေးရုံတခုရဲ့ ခွဲစိပ်ပြီးနောက် ပြုစုကုသမှု (post op: management) အစီအမံ ညံ့ဖျင်းမှုပါ။
ခွဲစိပ်ပြီး ၂ ရက်မြောက်မှာလူနာသေဆုံးရခြင်းဟာခွဲစိပ်ပေးတဲ့ဆရာဝန်အပြစ်မဟုတ်ပါ။
ခွဲစိပ်ရင်း (expire on operating table) ခွဲစိပ်တဲ့စားပွဲမှာသေဆုံးမှသာ ခွဲစိပ်ဆရာဝန်မှာ
ဆေးရုံအုပ်ခန့်ထားခြင်းဟာ လိုအပ်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကို လုပ်ပေးဖို့ပါ။ လူနာရှင်က ခွဲစိပ်ဆရာဝန်ကြီး ခေါ်ပေးပါတောင်း ဆိုသော်လည်း ခွဲစိပ်ဆရာဝန်ကြီးမလာနိုင်တာ
ငါပိုက်ဆံပေးထားတာပဲသူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီး အပြစ်ပုံချဖို့ မသင့်ဘူး။
သူ့မှာကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စ၊ နိုင်ငံတော်ကပေး အပ်တဲ့ကိစ္စတခုခုကြောင့် မလာနိုင်ရင် ဆေးရုံအုပ်ကအစားထိုး စီစဉ်ပေးရတယ်။ appendicitis ပုံစံများစွာရှိတယ်။
မိမိဖြစ်ဘူးသောပုံစံနဲ့မတူလို့ဒါ appendicitis မဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောမရဘူး
ခွဲစိပ်ခံလူနာများ ခွဲစိပ်ခံရပြီး ဆေးရုံကဆင်းသွားပြီးသည့်တိုင် ဗိုက်နာ(ချုပ်ရိုးနာ) နေတတ်ပါသည်။ ဗိုက်ထဲမှာခွဲစိပ်ကရိယာတခုခုကျန်နေခဲ့သော် ခွဲခန်းကျဆရာဝန်ဆရာမ အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါသည်။
ယခုကိစ္စမှာ ဝမ်းတွင်းကလီစာများ ရောင်ရမ်းခြင်းတွေ့ရသည် ဟုဆေးစာမှာပါသည်။(endometritis)။
သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တော့ မသိပါ။ ခွဲစိပ်ခန်းမသန့်ရှင်းလျှင်မည်မျှပင်ခွဲစိပ်ဆရာဝန်
တော်တော် ခွဲစိပ်ခံလူနာများရောဂါပိုးဝင်၍ ၂ ရက် ၃ ရက် အကြာမှာဖျားပြီးသေတတ်ပါသည်။
ဆေးရုံတခုမှာ ဆရာဝန်ကြီးတဦးကိုသာပုံအပ်ထား၊ ဖြစ်လာရင် လူနာရှင်ကရော၊ ဆေးရုံတာဝန်ရှိသူ
ဆေးရုံကို ရောက်လာကတည်းက ဆေးရုံမှာတာဝန်ရှိပါသည်။
သူနာပြု၊ တာဝန်ကျဆရာဝန် စသဖြင့်အသီးသီး တာဝန်ယူရပါသည်။ဆရာဝန်ကြီးမလာရောက်နိုင်က
လူနာကို အနီးဆုံးသူနာပြုက စောင့်ရှောက်ရမည်။ အနီးကပ်သူနာပြုမှတဆင့် အခန်းတာဝန်ကျ သူနာပြုဆရာမကြီး၊ ထိုမှတဆင့်အတွေ့အကြုံရှိ လက်ထောက်ဆရာဝန်ကြီးတဦး၊ ယခုပြင်ပဆေးရုံများတွင်ခန့်ထားသော ဆရာဝန်ငယ်များသည် အရေးပေါ်ကိစ္စ
(emergency) များမှာ အတွေ့အကြုံ နည်းသေးသဖြင့် မလုပ်တတ် မကိုင်တတ်ကြ။
ခွဲစိပ်ဆရာဝန်ကြီးအဖြစ်ဘွဲ့လွန် တက်ခွင့်မရသော်လည်း ခွဲစိပ်ခန်းမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ
တာဝန်ယူဘူးသော လက်ထောက်ဆရာဝန်ကြီးများ၊ သူနာပြုဆရာမကြီးများကိုသာ
တာဝန်ပေး၊ ထိုက်တန်သောလစာပေးခန့် ထားခဲ့သော် ဤသို့သေဆုံးရမှုမဖြစ်နိုင်။
ပါရဂူဆရာဝန်ကြီးများသည် သမားဂုဏ်ရှိ၊ ဆေးပညာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာလျက်ရှိသော
ဆရာဝန်ကြီးများ ဖြစ်ကြသူများချည်းသာဖြစ်၍ သမားအို၊ ဆုံးဖြတ်ချက်မှားနိုင်၊ လူငယ်များလို မသွက်လက်စသော ကိုယ်ထင်ရာမြင်ရာရေး၍ အပြစ်မရှာသင့်။ ယနေ.ဆရာဝန်အသစ်များကို ဆေးပညာသင်ကြားပေးလျက်ရှိသော ထိုသမားအိုများအားမပြစ်မှားထိုက်။
ယနေ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများ၏ အပုပ်နံ့ကား ဆိုးလှ၏။ ငွေကိုသာအဓိကယူ၍ဝန်ဆောင်မှု
အားနည်းသော ထိုဆေးရုံများကိုသာ နိုင်ငံတော်မှပိတ်သင့်သည်။ အရေးယူသင့်သည်။ ပါရဂူစမ်းသပ်ခအနိမ့်ဆုံး၅ဝဝဝကျပ် ရှိသောထိုပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတက်ရန်
အခမဲ့ဝန်ဆောင်ပေးရမည့်သွေးပေါင်ချိန်တာကိုပင် ၂ဝဝဝ ကျပ်ယူသည်။
သူနာပြုတယောက်အခန်းထဲဝင်လျှင်လဲ ကြေး သတ်မှတ်၍တောင်းသည်။
ဆရာဝန်(အထူးကု)တယောက် ဝင်လာကြည့်လျှင် သောင်းနှင့်ချီ၍စာရင်းမှတ်သည်။
သွင်းထားသည့်ငွေ ပြည့်သွားရင် ထပ်သွင်းရသည်။
ဆေးရုံဆင်းသည့်အခါ လူနာတယောက်သိန်း ဆယ်ဂဏန်း အထက်ကုန်သည်။
ဤမျှငွေကုန်သော်လည်း ပေးတဲ့လူကကြေကြေနပ်နပ်ပေးနေကြမှတော့ အနှီဝိသမလောဘ
သမားတို့ လူကိုမမြင်ငွေကိုသာမြင်သည်ဖြစ်၍ ထိန်းသင့်ပြီ၊ ကြပ်မတ်သင့်ပြီ။
အနှီဆေးရုံသည်တရားဝင် (in-patient) အတွင်းလူနာတင်၍ ကုသခွင့်ရှိသော
ဆေးရုံအဆင့်အတန်း ဟုတ်ပါ၏လော။ စီစစ်သင့်၏။
နာမည်ပျက်နေသော အစိုးရဆေးရုံကိုလူအများအားကိုးရတဲ့ အတိတ်ကပုံစံပြန်ရောက်သင့်ပြီ။
ဆေးရုံတာဝန်ကျဆရာဝန်များကိုထိန်းသင့်ပြီ။ အခပေး ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ငွေပေးနေရသော
ဆေးရုံထက် လူနာများအားသနားသင့်ပြီ။ အခမဲ့ဖြစ်သင့်ပြီ။
ငွေမတတ်နိုင်၍ အပြင်ကဆေးစပ် သောက်ရသောအခြေအနေမှာလည်း မသင့်၊
ဆေးအရောင်းဆိုင်(ပြင်ပ)ကစပ်ပေးသောဆေးကြောင့် လူမသိသူမသိ အသက်ပေါင်း
မည်ရွေ့မည်မျှသေခဲ့ ပြီးပြီမသိ။ မရှိသင့်သောဆေးဆိုင်များလည်း ပျောက်သင့်ပြီ။
“ အချုပ်ဆိုရသော်မည်သူ့မှာတာဝန်ရှိသလဲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ” ။
ကွန်မင့်န် အမှတ် ၁၉၂ မှ မှတ်ချက်ပေးသူ ရဲမြတ်ကို မှ တဆင့်.......
( Ye Myat Ko said...forward mail တစ်ခုပါ။ ပ၇ိသတ်များ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် link ပေးလိုက်ပါသည်။
အထက်ပါ link မှ တဆင့် download လုပ် ဖွင့်ကြည့်သောအခါ win-innwa font နှင့်ရေးသားထားသော Adobe reader နှင့် ကြည့်ရသည့် ပေးစာ တစ်စေါင်ကို တွေ့ရပါသည်။
ပေးစာရေးသားသူ သမားအိုက အင်တာနက်မှတဆင့် ဖြန့်ဝေခြင်းကို သဘောတူထားကြောင်းတွေ့ရပြီး ဤပို့စ်ကို စိတ်ဝင်စား မှတ်ချက်ပြုနေသူများ နှင့် လာရောက်လေ့လာ ဖတ်ရှုကြသူများ သိသင့်ဖွယ်ဟု ယူဆမိပါ သဖြင့် ပို့စ် တစ်ခုအနေဖြင့် ပြုစု တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။ သမားအို၏ သဘောထား၊စေတနာ၊တို့ကို ခံစား အသိအမှတ်ပြုနိုင်ကြပါစေ)
မူရင်းစာမှ zawgyi font သို့ Kanaung converter ဖြင့်ပြောင်းပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်စာများကို ပြန်ဖြည့်ခြင်း။ အောက်ကမြစ် အနေအထားပြင်ဆင်ခြင်း စာသားအနေအထား ဖတ်ကောင်းအောင် ချဲပေးခြင်းတို့မှလွဲ၍ မူလစာပြုစုသူ အာဘော်အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Dr.Nay Oo (Burma)
Labels: Medical negiligence, OpEd
Thanks , Dr. Nay Oo for your help. My connection isabit slow and I can't load ultrasurf so I just posted in comment section. I am sorry to learn that doctors' approach and our community's approach is quite different. From my point of view, dealingasituation with emotions isabit dangerous and people think of opposite way. May be they need to see how much internal conflicts to bear foradoctor in our country. Blaming is easy except that it doesn't help anybody.
SSC ကို လူနာများမှ သပိတ်မှောက်သင့်ပါသည်
You are totally wrong Ko Ye Myat Ko. This is not emotion.It comes fromalot of cries of the people. We understand the professionalism of Medical Doctor. However, we are discussing about the case .Have you ever seen person who has never response with emotion when they had lost their beloved one.Also,I am grown up in the compound of Hospital and my mother was also medical service. I have lots of experiences about un-ethical behavior of some doctors.Also I want to say is that I am not blaming the doctors.but,pls,accept to blame some black sheep.Because of my first cousin is MS of one of three hundred bed hospital,I understand both sides.But, I want to pay my sympathy to the suffered one.Blaming is easy.But,why they are blaming? They haveachance to blameonly .If rule and regulations are strong, they will not blame the Doctors. They will sue them only.I would like to kindly request to you as "Don't criticizes the Victims". Regards
I don't mean to patient's family, only my point of view. You may know about it, Many people don't accept my point of view of professionalism of doctors and they think I am an unthical one. I know difficulties of our people bcoz their difficulties are also mine, too. But you can't keep blaming every doctor for bad doctors, or for beingadoctor. It is an extreme reaction. I like suing better than blaming coz both parties can at least settle on the result but we needafair legal system for public.
Thanks for showing email about the incident.
I don't agree with some of the facts in the article he said.
It was reluctant to accept the doctor's fault only if the patient dies on the operating table not on the postop 2nd day.
Let me post again my comment from previous one.
I know the surgeon is very experienced and m not criticising him personally but only on his treatment on the patient.
I want to point out the incident based on the facts I have read.
Firstly, the patient has been High Temperature for5previous days and even if it is diagnosed as favour of appendicitis, great surgeon will not practice the operation in terms of surgical point of view.
Secondly, the surgeon said she is very pale and pressure is low. The facts he should have to think, check and exclude the other possible causes like Dengue fever which was the cause of death.
Thirdly, the surgeon came to see her in post operative period only once in two days even though her condition was extremely and unexpectedly deteriorated. It should be the multi-involving team management.
Fourthly, Hospital had the meetings and admitted that was their fault.
I can see some missing care and negligence in terms of doctor patient relationship.
That case should be properly conducted and questioned to proceed the enquiry to find out the truth. But it seemed to be doctor's.
In terms of Journalism, I think they should ask and interview almost everyone involving in the incident.
However, the words they mentioned in the article are those the mother said. I think it was reasonable for the ethics and they should mention the sufferer's feelings to know people publicly.
The fact is that there is no place to complaint and no proper laws for the misconduct in Myanmar. If there is, I'm sure the future incident can be protected by taking count from them and making policy, guidelines or protocols for doctors treatment as in UK for instance.
Hope this case is the beginning of the justice.
Sadly, the parents are swallowing their sorrows quietly.
That's the fact...
Eventually, the arrow is leading back to the policy makers who govern the country.
ဖေဖေသမားအို ပြောတာကလည်း ကောင်းတော့ ကောင်းတယ်။ သိပ်ဘ၀င်မကျသေးဘူး။
မေးခွန်းတွေ ထကြွသောင်းကျန်းလာလို့ ခုလို ချရေးလိုက်မိတယ်။
(၁)၁၅ နှစ်သမီးကို ဆေးရုံတင်တာ ကလေးအထူးကုက ကြည့်သလား။ (ခုလိုရေးနေတုန်း တစ်ယောက်ကပြောတယ်။ ၁၂ နှစ်ကျော်ရင် လူကြီးတဲ့။ ၁၈ နှစ်ကျော်မှသာ လူကြီးလို့သတ်မှတ်တာဟာ physiology အရရော lawsအရရော ဆီလျော်ပါတယ်။ ဘယ့်နှယ်ကြောင့် ၁၂ နှစ်ကျော်ကို ယူထားတာလဲ။ နားမလည်။ ကိုင်းထားပါတော့။ ကလေးအထူးကု မကြည့်ဘူးဆိုပါစို့)
(၂) Preoperative assessment တွေ လုပ်တယ် ဆိုပါစို့။ Vital signs တွေက ဘယ်လိုလဲ။ Routine blood tests တွေ လုပ်ထားသလား။ Urine tests တွေ လုပ်ထားလား။ Diagnosis က ဘာလဲ။ appendicitis ပဲလား။ ဒါကို ဘယ်လို confirm လုပ်သလဲ။ ESR က ဘယ်လောက်လဲ။ WBC နဲ့ Leucocytes lymphocytes တွေက ဘယ်လိုလဲ။ Dengue ဖြစ်ဖို့ အားသာတာ တစ်ချက်မှ မတွေ့မိဘူးလား။ ဒါမှမဟုတ် ဒီ tests တွေကို မလုပ်ဘဲ ကျော်ချလိုက်မိသလား။ X ray abdomen လုပ်သလား။ USG၊ CT လုပ်သလား။ မလုပ်ဘူး။ Emergency မိုလို့ အချိန်မရလို့ ဆိုပါစို့။
(၃)ထား။ မခွဲခင် လူနာရဲ့ အခြေအနေက ဆိုးသလား။ လူနာရှင်ကို ဘယ်လိုရှင်းပြထားသလဲ။ consent ယူထားသလား။ post-operative period မှာ ဆာဂျင်ကြီးတာဝန်မရှိလို့ ဘယ်သူ တာဝန်ရှိသွားသလဲ။ လုပ်ကြပါဦး။ post-op diagnosis က ဘာမိုလို့လဲ။ Appendicitis ပဲလား။ appendicitis ကို pathologist confirmed လုပ်ထားသလား။
(၄)MO က Cardiologist ကို ဘာကြောင့် ပြရသလဲ။ သူ့ Diagnosis ထပ်ပြောင်းသလား။ မပြောင်းရင် ခေါ်စရာမလို။ ပြောင်းတယ်ဆိုရင် ဘာလဲ။ DHF လား။ Cardiologist က ဘာရောဂါနာမည်တပ်သလဲ။ ဘာလမ်းကြောင်းနဲ့ ကုသလဲ။ ဘယ်မှာ ကုသလဲ။ ၀ဒ်ထဲမှာလား။ ဘယ်ဝဒ်လဲ။ Medical လား Surgical မှာ on call လာကြည့်တာလား။ ICU မှာလား။
(၅)ICU မှာဆို မေ့ဆေးဆရာဝန် ပါတဲ့ ICU team ကိုပါ ဆက်မေးရတော့မယ်။ ICU မှာ diagnosis က ဘာလဲ။ ဆုံးခါနီး ဘယ်ဆရာဝန်က revise လုပ်သလဲ။ ဘယ်အဆင့်ထိသွားသလဲ။ BLS လား။ Advanced အထိလား။ Defibrillator ဘယ်နှစ်ကြိမ်သုံးသလဲ။ ဘာဆေးတွေ သုံးသလဲ။ Cause of death က ဘာလဲ။ DSS လား။ Septic shock လား။
(၆)post-moterm မှာ Forensics တွေရော ပါဝင်ရဲ့လား။ pathologists တွေနဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့ သမားတော် ဆာဂျင်တွေအားလုံးပါဝင်သလား။ Macro၊ Micro, Biochemistry အားလုံး လုပ်သလား။ Cause of death က ဘာလဲ။
(၇)ဒါနဲ့ ဖေဖေသမားအို ဆိုထားတဲ့ Endometritis ဆိုတာကြီးကို လုံးဝနားမလည်ဘူး။ ဘယ်ဆေးစာမှာ ဘယ်အရာကို အကြောင်းပြုလို့၊ ဘယ်သူက ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုရေးလိုက်လို့ ဒီစကားလုံးကြီး ထွက်လာရသလဲ။ ဒါကြီးကလည်း ခက်တာကြီး နော်။ ခက်တော့တာပါပဲ။
ကိုင်း ဆိုက်ဒ်ပိုင်ရှင် များလည်း စိတ်မညစ်ကြပါနဲ့။ ကျနော့်မေးခွန်းများကို ဖြေဖို့ ဒီဆိုက်ဒ်မှာလည်း တာဝန်မရှိသလို ဘယ်သူ့မှာမှလည်း တာဝန်မရှိပါဘူး။ မေးချင်လို့ မေးလိုက်တာပါပဲ။ ဒါဟာ အော်သံသက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေထဲမှာ ကျနော့်လို့ လူပြိန်းတွေရှိသလို မပြိန်းတဲ့လူတွေလည်း ရှိတဲ့ အတွက် မေးခွန်းတွေ လာမှာပါပဲ။ အမေးရှိရင်တော့လည်း အဖြေကရှိရမှာပေါ့။
ဒါကြောင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးပြိးလို့ ဖြေရှင်းချက်ထွက်လာမဲ့ အချိန်ကို အားလုံးက စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။ ကျနော်သိချင်တာတွေကိုလည်း အဲဒီကျမှ အားရပါးရ ဘ၀င်တကျ သိခွင့်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
(comment ရှည်လို့ error ပြနေလို့ ခွဲတင်လိုက်ရတာ sorry ပါ)
Bravo ရေ သိချင်တဲ့မေးခွန်းတွေကို အဖြေရဖို့ fact finding group ကို လိုက်ခိုင်းထားတယ်လေ- ဟိ။ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ level နဲ့ သိနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်လို့ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကလေးကို ၁၂နှစ်အထိပဲ သတ်မှတ် တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ အင်္ဂလန်မှာတော့ အရင်ပို့စ် မှာ ပါသလိုပဲ၊ ၁၅နှစ်ဟာ စကောစက ဖြစ်နေ သော်လည်း ကလေးဆောင်မှာ ကုတာတွေ့ရပါတယ်။
Endometritis ဆိုတာကိုတော့ မေးလ်ထဲက တွေ့ရတဲ့ အတိုင်းပါ။ ဆေးစာမှာပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ နားတော့ မလည်မိပါ။ အဖြေတွေပေးဖို့ကတော့ အစကတည်းက ဖောဝဒ်မေးလ်က ရတယ်ဆိုတာ ဝန်ခံထားသလို ဖေဖေသမားအို တယောက် မြင်ရာအရပ် က တုံ့ပြန်လာခဲ့မှ တင်ပေးနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးကြတာ တွေလည်း တော်တော် ဒေါင့်စုံလောက်ပါပြီ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စိတ်အေးအေးထားပြီး အဖြေတခုခု ရတဲ့အထိ အချိန်ပေးစေါင့်ကြည့်ကြစို့လား ခင်ဗျာ။ ကွဲပြားတဲ့ အမြင်သဘောထားတွေ အများကြီး တွေ့ရ လေ့လာရပေမဲ့ ဆုံမှတ်တခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေး စေါင့်ရှောက်မှု တိုးတက်လာရေးကို ဆက်လက် ကြိုးစား ဆောင်ကြဉ်း နိုင်ဖို့ အသိ အမြင် ပွားများလာမယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
အောက်က ဆရာဝန်လို့အမည်ခံထားတဲ့၇ဲမြတ်ကလည်း အပြည့်အ၀ထောက်ခံထားတယ်..ဟဲဟဲ
အောက်က ကိုရဲမြတ် (ဆရာဝန်ဟု အမည်ခံရဲသူ) ရဲ့ ကော်မန့်အချို့ကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ရှင့်။
မျှတပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ သဘောထားကို ဆက်လက်ဖတ်ရှူချင်လိုပပါ၇ှင့်
ဘာရယ်လို့ ဟုတ်ပါဘူး ငြင်းနေကြတာစုံနေတော့ ငယ်တုန်းက ကြုံဘူးတာလေး သတိရလာလို့ ပါ
ကိုတို့မြို့ လေး (ရွာသာသာပါ ) အဲမှာ အစက ပို့ စတာဆိုတာ ရောင်းမရဘူး
ပုံပါတာဆိုလို့ ဘုရားပုံနဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီး မျက်နှာဖုံးပါတဲ့ပြက္ခဒိန်လောက်ရောင်းရတာလေ
အဲမှာ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒေးဗစ်ချန်းဆိုတဲ့တရုပ်မင်းသားနဲ့တရုပ်သိုင်းကားပြရော
ဒီတင် တရုပ်သိုင်းမင်းသား ပိုစတာတွေ ရောင်းရရော
အဲတော့ အဲမှာ ငခူရေတွင်းချထားတဲ့ပုံနဲ့ခပ်ပိန်ပိန် ဆံပင်ရှည်ရှည် တရုပ်လေးတယောက် အင်္ကျီချွတ်ထားတ့ ပုံ ပါလာတယ်လေ .။ လက်ထဲမလဲ ခွေးခြေခြေထောက် ၂ချောင်း ကြိုးဆက်ထားတဲ့ဟာကြီးကိုင်လို့။
အောက်မှာ ဘိုလိုရေးထားတာတော့ပါတယ် Bruce lee တဲ့။
ဒီတင် ကိုတို့ ရွာက ကာလသားတွေ အလုပ်ရှုပ်ကြရော
အဲကောင်က ဘယ်သူလဲ ။ သူ့ လက်ထဲက ဟာကြီးကဘာလဲ ပေါ့
ဒီတော့ခပ်လည်လည်တယောက်ကို ( ဟီး အမှန်တော့
ကို့ ကာစင်ပါ ဂျီတီအိုင် တ၀က်ဆင်း )ကို စားရိတ်ပေး ရန်ကုန်လွှတ်တော့တာပေါ့ ။
သင်သည် ဒီ ပရုတ်ဆီဆိုတာနဲ့သူ့ လက်ထဲက ခွေးခြေတုတ်အကြောင်း မသိမချင်း ရန်ကုန်မှာနေစေဆိုပြီးလေ ။
သူလဲ ကြံရာမရနဲ့(ရွာက ရီးစား ကလေး ၂ယောက်အမေလဲလွမ်းတာပါတာကိုး )
တရုပ်တန်းညဈေးတန်က တွေ့ ရာ အဲလူပုံပါတဲ့ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင် မဂ္ဂဇင်းတွေ မချပြီး ရွာပြန်ရောက်တယ် ။
ရွာမှာတရုပ်စာဖတ်တတ်တဲ့တရုပ်က လက်ချိုးရေရတာ
သူတို့ ဖတ်ခိုင်းတော့ သူတို့ က အနီကျောင်းထွက်မို့ တဲ့။ အဖြူလိုရေးထားတဲ့ဟောင်ကောင် မဂ္ဂဇင်း ဖတ်တတ်ဘူး ဖြစ်နေတာပေါ့ ။
အဲနဲ့လက်ရှာတော့ကာလသားတွေ လူရာမသွင်းတဲ့မရှာကြီးတယောက်က (ငယ်တုန်းကတော့ သူ့ ကို တကယ့် လူကြီးကြီးထင်တာပါ။ ခုမှ ပြန်ြတွေးမိတော့ အဲတုန်းက သူ့ အသက်လဲ ရှိလှ ၃၀ပေါ့ )
သူ့ ဆီသွား သူကြိုက်တာလေးတွေနဲ့မျက်နှာလုပ်ပြီး ရွာက လူတွေက ဘာသာပြန်ခိုင်းရတာပေါ့ ။
ဒီလိုနဲ့အဲ ဘရုစလီ ရဲ့အောကာင်းရော သူရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေရော.။ နောက် သူ့ လက်ထဲကိုင်ထားတာ နန်ချပ်ကူခေါ်တယ်ဆိုတာပါ သိလာရတာပေါ့
ဒီတင် ရွာထဲ နန်ချပ်ကူရောဂါထပါလေရော
ပန်းဘဲတွေလဲ မအားရ ၊ ပန်းပွတ်တွေလဲ မနားရပေါ့
ရရာ သံချောင်း ပိုက်လုံး ပိတောက်နှစ် ၊ ယင်းတိုက်သား နောက်ဆုံး အိမ်က ခွေးခြေ ခြေထောက် ၂ချောင်း အမေမသိအောင်ဖြုတ် ။
ရရာကြိုး သဘောင်္ကြီး တက်မကြိုး ။ ခွေးချီတဲ့ သံကြိုး နိုင်လွန်ကြိုး ။ လျှော်ကြိုး နောက်ဆုံ ရွာဦးကျောင်းက ရေငင်တဲ့ကြိုး နဲ့ ဆက် ။
လူပြတ်တဲ့နေရာ ဘောကွင်း ၊ အိမ်နောက်ဖေး ၊ နောက်ဆုံး ဈေးအိမ်သာရှေ့ က ကွက်လပ်ပါမကျန် ။
သွားမွှေ့ ကြရော ။
(အဲအချိန်မှာ နန်ချပ်ကူဆိုတာကို သင်ဘူးဘို့ ဝေးလို့အရင်က ကြားဘူးတဲ့ လူတောင် ကိုတို့ ရွာမပြောနဲ့ပုသိမ်လို မြို့ မျိုးတောင် ရှာမရဘူးလေကွာ ) :P
အဲတော့ မြို့ ရောက်ခါစ မြို့ နယ်ရာဝန်ကြီးပေါက်စလေး ခညာ ကွဲလာတဲ့ ခေါင်းတွေ ချုပ်ရတာ ထမင်းတောင်ညမနက်ပေါင်းစားရသတဲ့။
သူများလာရိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်ဟာကြီးနဲ့ကိုယ်ထုမိတာပါ ။
အဲတင် ကိုတို့ ဆရာ ကိုမြင့်ဆွေက ပြောရှာပါတယ်
လေးကွက်တောင် ဘယ်နေမှန်းမသိတဲ့ ကောင်တွေက အဲဟာကြီးသွားမွှေ့ တာ ကွဲတာတောင်နဲသေးတဲ
(ကြိုက်သလိုသာ ယူကြပါကုန် ။ ၀င်ပြောမိလို့ လဲ ဆရာဝန်တွေကရော ဆရာဝန်မဟုတ်တဲ့ သူတွေကပါ ၀ိုင်းဆဲလဲ ခံရုံပါဘဲ ) ဟိဟိ
ဖေဖေရယ် ခုဆရာဝန်ကြီးက လက်သင်မို့လို့ လက်ယားလို့ခွဲတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံလိုချင်လို့ပါ။
ဆရာဝန်ကြီးတောင် ခွဲပြီလက်အိပ်လေးအသာချွတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီပဲ ဆေးရုံကအစီအမံညံ့ဖျင်းတာအပြစ်တစ်ခုထဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဖေဖေ လူနာအခြေအနေမကောင်းဘူး မြန်မြန်ပြန်ချုပ်ပြီး ခွဲစိပ်ခန်းကထွက်ခဲ့တော့ မဟုတ်ရင် ဖေဖေ့အပြစ်ဖြစ်နေအုံးမယ်။ အပြင်ရောက်မှသေချင်သေပစေ။
ဒါပေါ့ဖေဖေရယ် သူမအားဘူးလေ။ တရုတ်ကိုလဲသွားရအုံးမယ်။ လူနာတောင် ၁ယောက်ကို ၃မိနစ်စီပဲအချိန်ပေးနိုင်တာ။
ဖေဖေကလည်း စစ်ဆေးချက်တွေကိုသေချာလဲမသိပဲ ဆရာဝန်ကြီးအပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကြီးပဲ။ သမီးဖေဖေအစစ်မှဟုတ်ရဲ့လား။ ဟိုဆရာဝန်ကြီးများလားဟင်။
မပြစ်မှားရဲပါဘူးဖေဖေရယ်။ သမီးတို့ရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ ဆရာသခင်တွေပဲဟာ။
ပို့ထားပို့ထား ဖေဖေ။ ရှိရှိသမျှအပြစ်တွေ တာဝန်ကျဆရာဝန်နဲ့ ဆေးခန်းဘက်ကိုသာပို့ထား မဟုတ်ရင် ဖေဖေတရုတ်ပြည်မှာ ခေါင်းချသွားရမယ်။ ဒီမှာ ဆမသိမ်းဖို့စောင့်နေကြတယ်။
(ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိသလဲ မေးခွန်းခေါင်းစဉ်နဲ့ အဖြေများကိုသာထည့်သွင်းရေးထားသော စာပိုဒ်များသာဖြစ်ပါတယ် ဆေးခန်းနဲ့ တာဝန်ကျသောအတွေ့အကြုံမရင်ကျက်သေးသော ဆရာဝန်ဆရာမများတာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်။)
(Forward mail တစ်ခုအနေနဲ့ သဘောထားပြီ စိတ်ထဲတွေးမိတာလေးတွေ ပြန်ရေးသွားပါတယ်။ ဆေးပညာလောကသားမဟုတ်တဲ့အတွက် လူပိန်းတွေးနဲ့ မှတ်ချက်ပေးလိုက်ချင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ အမှားပါက နားလည်ပေးပါ။)
Myat Minn said...
Ko Ye Myat Ko
I know why you are saying things like that ... it's because you'reamedical doctor..!
that's definitely the result of "them and us" culture ... you "know all" doctors ... us "stupid" people ...
you say things like "I like suing better than blaming" ... how could you say that ... everyone in Myanmar knows that suing is not the efftctive option ...
not like you ... I welcome the way journalist are saying this ... it'sachange ... that will enable the people to be treated more fairly ...
ကိုtint ပြောတာလဲ ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကွဲကာမှကွဲရော နံချပ်ကူလောက်တော့ မြင်ဖူးသွားသင့်တယ် ထင်တာပဲ။
ကိုနေဦးပြောတာလည်း ဟုတ်တယ်။ ဆုံမှတ်တစ်ခုမှာ သွားတူနေပါတယ်။ အားလုံးသော မိတ်ဆွေများဟာ မကျေနပ်လို့ ထပြောတာထက် ပိုပါတယ်။
ဖြေရှင်းချက်တွေ ဘာညာကွိကွတွေ ထွက်လာတာကို အားကြိုးမာန်တက် မျှော်လင့်တကြီး စောင့်မျှော်နေသူတွေ ရှိပါကြောင်း။
This is one of cases happened in Myanmar.we should overview and focus on Myanmar health care system in both private and government sector,. Please dont focus on Dr. U KYi Soe.
သိလားဆိုတော့ ကိုယ်လဲ တကယ်တော့မသိပါဘူး ။
မသိတဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာ အရေးအကြီးဆုံးအချက်က ကိုယ်ဟာ အလုပ်သမားသာ ဖြစ်တယ် ။ manager ဘယ်တော့မှာ ဖြစ်မဲ့လူမဟုတ်တာဘဲ ။
ခုပြောနေကြတာက ဗမာပြည် စနစ်ကြီး တခုလုံးနဲ့ ချီပြောရင် ဘယ်လို ပြင်ဆိုတာ တကယ်ကျတော့ မလွယ်လှပါဘူး ။
ခေါင်းထဲ ခုပေါ်လာသလိုဘဲ ချရေးရရင် လက်ရှီ ဗမာပြည်ဟာ အစိုးရက အခွန်တွေကောက် ( ၀င်ငွေ ခွန် ။ အမွေခွန် အမြတ်ခွန် ) ပြီး လူတိုင်းကို ဖရီးကုပေးနိုင်တဲ့ယူကေစနစ်ကိုတော့ လောလောဆယ်မလိုက်နိုင်သေးတာ သေချာတယ် ။
၁) rocket ဆိုတာ စထွင်တာ ( ရှေ့ က ဟာတွေခဏထားနော် ခေတ်သစ်မှာဘဲပြောရရင် ) Germany ကဘဲ ။ ငွေတွေအများကြီး လူတွေအချိန်တေါ အများကြီးသုံးခဲ့ ရတယ် .။ နောက် အမေရိက နဲ့ရုရှ က အကြနေ ဆင့်ထွင်ရုံဘဲ ။ ဟော တရုပ် ကုလားနဲ့ကိုးရီးယားကျတော့ အဲက ကူချရုံဘဲဆိုတော့ ပိုလွယ်ပြန်ရော ။ ( အစကနေစဘို့မလိုတာပြောပါတယ် )
၂) နာဂတောင်တန်းမောင်ကြည်ဇင်ဆိုတာ ကြားဘူးလားမသိ ။ စာရေးဆရာ ။ သူကတခါဘာပြောဘူးလဲဆိုတော့ကျောင်းသားလေးတွေ နယ်လေ့လာရေးထွက်တာကောင်းပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ပိုပြီးမြင်တတ်တဲ့စာရေးဆရာတွေကိုရော မလွှတ်သင့်ဘူးလားတဲ့။
၃) ထိုင်းက ချူလာလွန်းကွန်းဘုရင်က ပြောတာရှိတယ် ။ သူ့ လူတွေကို နိုင်ငံခြား ပညာတော်သင်လွှတ်တော့လေ ။ အတိုချုပ်သဘောပေါက်တာက စာတွေ TECHNOLOGY တွေ က ဆရာ ထိုင်းခေါ်သင်လဲ ရတာဘဲတဲ့။ မင်းတို့ လုပ်ရမှာက နိုင်ငံခြားက လုပ်နေတဲ့ စနစ်ထဲက ထိုင်းနဲ့သင့်တော်တာကို ယူပြီး ထိုင်းမှာပြန်တိုးတက်စေသင့်တယ်တဲ့။
၄) ဒါကတော့ ကိုယ်ပြောလဲ လူ ကြိုက်မယ်မထင်မိဘူး။
ထိုင်းပညာရေးစနစ်မှာ ကိုတိတိကျကျသိထားတာ တခုရှိတယ် ။ ထိုင်းမှာ ၁၉၉၀ ၀န်းကျင်မှာ neurosurgeon ၁၀၀ကျော်ရှိတယ် ။ အဲထဲမှာ အမေရိကန်ဘွဲ့ ရ်က ၆ယောက်ဘဲပါတယ် ။ ကျန်တာက သူတို့ ထိုင်းမှာဘဲ လေ့ကျင့်မွေးထုတ် ပေးပြီး အမေရိကန်က လာစစ် အသိအမှတ်ပြုပေးရတာ ၊
functioning arm and regulatory arm ဆိုပြီးရှိတယ် ။
အဲ ၂ခုက မျှနေမှ ကောင်းတယ်
function arm က အင်အားကြီးနေရင်လဲ စည်းမဲ့ ကမ်းမဲ့ဖြစ်တတ်တယ် ။
regulatory arm က အင်အားကြီးလွန်းရင်လဲ အဲထကြ လူတေါဟာ စက်ရုပ်ေါလို ဖြစ်လာတတ်တယ် ။
ခက်တာက ငွေကြေးဘဲ functioning arm က လူတွေ နဲ့ဆက်ဆံနေရတော့ ငွေနဲ့ကျော်ကြားမှု သူတို့ က ပိုရတတ်တယ် ။ အဲ အခါမှာ regulatory arm ဟာ ရမဲ့ငွေလေးမျှော်ပြီး castrated .
တခါ regulatory arm က ငွေချပေးရတဲ့အခါကျပြန်တော့လဲ ( ခုယူကေလိုပေါ့ ) regulatory arm အကြိုက်ဘဲ လုပ်ပြီး ငွေ ရပြီးရော ဖြစ်တတ်ပြန်တယ် ။
(ကိုတွေးမိတာချရေားကည့်တာပါ ။ လက်တွေ့ှ မှာ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စီမံချက်မျိုးတော့ ကိုလဲ့ချမပြတတ်ဘူး။)
ဆရာဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင်ကိုသေရာကနျိုးရရင်တော့ တမျိုးပေါ့လေ ။ သူ့ မိန်းမပြောတာဘဲ ဂျပန်ဝင်ကာစက ဗမာနိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတဲ့ စာတန်းကြီးကို တပတ်နဲ့အပြီးရေးတာတဲ့။ (ဟီးး အဲဒါလဲ နောက်ငြင်းစရာတကွက်ဖြစ်နေအုံး မလားမသိ )
ရီဂူများလို့ ယူကေ မကြိုက်အားရင် ယူချင်းတူတဲ့ ယူအက်စ်ပုံစံ ယူရင်ရော ကိုတင့်။ မကြိုက်သေးရင် တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ အီသီယိုးပီးယား၊ အီရတ်၊ နမီးဘီးယား၊ ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကြိုက်တဲ့ပုံစံယူကြတာပေါ့။
ကိုယ်သိထားတာပြောရ၇င် စနစ်တူတဲ့နိုင်င့ ၂ခုရယ်လို့မတွေ့ ဘူးသေးဘူး ။ နိုင်ငံတိုင်း သူ့ ဝိသေသနဲ့ သူဘဲ . ။ ဟိုဘက်မှာ ငယ်နိုင်ပြောတဲ့ယူကေနဲ့အော်ဇီတူတယ်ဆိုတာလဲ ကိုက လက်ခံမရဘူး
မတူတာတွေအများကြီးဘဲ ။.ူကေစနစ်က အခွန် နင်းကောက်ပြီး လူနာကျဖရီးကုတာ .။ အော်ဇီကျတော့ အခွန်လျှော့ပြီး အာမခံမှာဆော်တယ် ။ လူနာက ဆေးခန်းမှာ သူ့ အာမခံသုံးတယ် ။
ဆေးဝယ်ရာမှာလဲ ယူကေက ( ဖရီးရတဲ့ သူမဟုတ်ရင် တကြောင်း ၇ပေါင်အသေကောက်တယ် ။ အော်ဇီက ဆေးလိုက်လို့ပေးရတဲ့ငွေကွာတယ် ။
ဗမာပြည်မှာက ခုစနစ်က ဘယ်လိုလဲ??
ကိုတော့ မသေချာဘူးနော် ။ ထင်တာတော့ စစ်ဆေးရုံက တလိုင်း ၊ အပြင်ဆေးခန်းတွေက တလိုင်းနဲ့အစိုးရဆေးရုံတွေက တလိုင်းသွားနေတဲ့စနစ်ထင်တာဘဲ ။ ဖြစ်ချင်တိုင်းသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ခုနေခါမှာ ငါတို့ ဗမာပြည်မှာ လူဦးရေက ဘယ်လောက် ။ တနှစ်အတွက် ကျန်းမာရေး အသုံး စရိတ်က ဘယ်လောက် ။ အဲမှာမှ ဆေးနဲ့ ကရိယာ ကဘယ်လောက် ။ ၀န်ထမ်းလခကဘယ်လောက် ။ ခိုးလို့ကုန်တာက ဘယ်လောက် ။ ဆေးခန်းပိုင်ရှင်တွေ အမြတ်ယူသွားတာက ဘယ်လောက်ဆိုတာကို လက်ဝါးပေါ်တင်ကြည့်သလို သိနေတဲ့ဆရာကြီး ၃ယောက်လောက်ကို ၆လလောက် ယူအက်စ် ။ ယူကေ ၊ အော်ဇီ။ ယူရုပ် ၊ တရုပ်နဲ့Parkistan ကို လေ့လာရေးသွားစေပြီး ကိုတို့ ဗမာပြည် ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ပေပါကြီးတစောင်ရေးပြီး
အင်း ရေးပြီး ဘယ်အိမ်သာထဲ ချရပါ့ ။ :P
ကို Tint ပြောတာကောင်းတယ်။
ဗမာပြည်စနစ်က သုံးခုနဲ့ရမယ်မထင်ဘူးဗျ။ ခြောက်ခု ခွဲမှရမယ်။
(1)စစ်ဆေးရုံ၊ (2)အစိုးရဆေးရုံ၊ (3)အပြင်ဆေးခန်း အကြီးစားများ(4)ဂျီပီ ဆေးခန်း အသေးစားများ (5) တိုင်းရင်းဆေးခန်းများ နှင့် (6) အများပြည်သူတို့ အလွန်အားထားရသော ရမ်းကု စနစ်။ အများစုကတော့ အိမ်တွင်းဖြစ် ဆေးမြီးတိုစနစ်နှင့် ပျောက်သွားတာပါပဲ။
ပေပါ အသံကြားတော့ နားရွက်တောင် ထောင်သွားတယ်။ အဲဒီအကြံကို တစ်လုံးမကျန် ထောက်ခံပါကြောင်း။ ပေပါသာ ပြီးပါစေဗျာ။ ဘယ်နားမြှုပ်ထားရမလဲ ဟိုလူတွေ သိပါတယ်။
hsu hsu said...
ကျွန်မလည်း အထူး ကုဆေးခန်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး စိတ်ထဲမှာမကျေမနပ်ခံစားနေရသူတစ်ယောက်ဇြစ်ပါတယ်။ဗိုက်ခဏခဏအောင့်လို့အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းအထူးကုနဲ့ ပြတော့မှန်ပြောင်း ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ ကြည့်ခဲ့ပါတယ် .ပါရဂူဆရာဝန်မကြီးက မှန်ပြောင်း ကြည့်ပြီးပြီးချင်းအစာအိမ်အတွင်း နံရံ့ယောင်တာတဲ့. ကျွန်မကကင်ဆာဖြစ်နီုင်ပါသလားရှင်ဆိုတော့ရောဂါကိုရှာရမှာပဲတဲ့.ကျွန်မအမျိုးသားကသိလိုတာလေးတွေထပ်မေးတော့အန်တီတို့ မှာအချိန်မရှိလို့ ထပ်မရှင်းပြနိုင်ပါဘူးတဲ့..ဒါနဲ.့ တစ်လစာသောက်ဆေးပေးပြီး တစ်လကြာရင်ပြန်လာပြဖီု့ ထပ်ချိန်းပါတယ်..မနေ.့ က တစ်လပြည့်လို့ ပြန်သွားပြတော့ စမ်းသပ်ပြီးဖြူတယ်လည်းမပြောဘူးမည်းတယ်လည်းမပြောဘူး.ဆေးနှစ်ပတ်ထပ်သောက်ခိုင်းတယ်..ကျွန်မကရွောါအခြေအနေမေးမလို့ လုပ်တုန်းမှာပဲ နောက်လူနာကိုထပ်ခေါ်တယ်.ကျိန်မလည်းအီလည်လည်နြဲ့့ပြန်ထွက်ခဲ့ရတယ်..ကျွန်မကအရင်ကလည်းအစာအိမ်ယောင်လိုက်အူယောင်လိုက်နဲ့ ခစခစဖြစ်ဖူးလို. အူလမ်းကြောင်းအထူးကုနဲ.့ ပြတာပါ.အခုတော့ရောဂါအကြောင်းဂဂဏဏမသိရဘဲ ပိုက်ဆံကတော့တစ်သိန်းခွဲလောက်ကုန်သွားပါပြီ..အဲဒီလိုပဲ အထူးကုတွေက လူနာရောဂါကို သေသေချာချာ ရှင်းမပြအားဘဲ ပိုက်ဆံကိုတော့ အထူးယူတတ်ကြပါသလား..
ဆရာဝန်ကြီး အမှာ မဟုတ်ပါဘူး အထူးကုမှာသွားပြတော့ ဟိုက အထူးစပယ်ရှယ် ကုပေးလိုက်တာ လက်လွန် သွားတာပါ။ ပြီးတော့ ဘောပွဲ လည်းရှုံးထားတယ်ထင်တယ်။
SSC ကိုလူနာများမှ သပိတ်မှောက်သင့်ပါသည်။
SSC ကို လူနာများ သပိတ်မှောက်သင့်သည်ဆိုတော့ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများကိုရော ကြိမ်စာတိုက်သင့်ပါသလား။
စာနယ်ဇင်းများ စည်းဘောင်လွတ်နေသည်ဟု စွတ်စွဲခဲ့ကြသောသူများက ခုလို ဆူပူအောင် သွေးထိုးနေကြတာရော မည်သည့်ခေါင်းစဉ်တပ်ရပါ့မလဲ။
ဟုတ်ကဲ့ ခုဆိုဆေးကောင်စီရဲ့ အရေးယူမှုတွေထွက်ပေါ်လာတော့ ကျေနပ်တဲ့သူတွေလည်းကျေနပ်လောက်ပါပြီ။အခုအပြစ်ပေးမှုမှာ စနစ်တခုအပေါ်မှားသာလို့မှားကြတဲ့သူတွေ ပဲအပြစ်ရခဲ့တာပါ။ပြသနာကြီးထွားမှုဖြစ်မလာခင် ကြီးတဲ့အမှုခပ်သေးသေးဖြစ်အောင်ခပ်မြန်မြန်ပဲ ဖြေရှင်းလိုက်ကြတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျနော်တို့လိုချင်တာ ဆေးခန်းနဲ့ ဒီဖြစ်ရပ်မှာပါဝင်နေတဲ့ဆရာဝန်တွေ အပြစ်ပေးအရေးယူခံရတာမျိုးမဟုတ်ပဲ လက်ရှလည်ပတ်နေတဲ့ စနစ်၊အသုံးစရိတ်နဲ့ ဥပဒေ အသက်ဝင်မှုကို ပိုပြီတိုးတက်မှုရီလာစေချင်တာပါ။
]]usef;rmjcif;onf vmbfwyg;}}qkdwJh pum;[m ,ckacwftcgrSm ydkNyD;wefbdk;&SdvmygNyD/ usef;rma&;ESifhywfoufí usrwdkUrdom;pktawGUtBuHKav;rsm;udk wifjycsifygw,f -
1982 ck0ef;usifcefUwGif yxrOD;qHk;BuHKawGUcJh&onfh rdom;pk0ifxJrS nDrjzpfol naeapmif;cefU tcsdefwGif Adkufatmifh? Adkufemjzpfojzifh &efukefjynfolaq;½HkBuD;odkU a&muf&SdchJ&ygonf/ (tqdkygacwf tcgu Scan zwfjcif;? ultrasound ½dkufjcif;rsm;acwf rpm;ao;yg/ r&Sdao;yg[k ajymvQif ydkrSefygrnf) ,ckwavmtcsdefwGif rSm;,Gif;pGmaq;ukorIjzihf jyóemjzpfyGm;aeaomtqdkyg cGJpdwfq&m0efBuD;\_ tjyifydkif;vufxdawGUprf;oyfcsufjzifhom &J0ifhpGmqHk;jzwfcsufcsí vlemonf tpmtdrftltwufayguf cgeD;tajctaejzpfojzifh cGJpdyfuko&efvdkaMumif; ajymMum;í cGJpdyfukocJh&ygonf/ trSefwu,fyif aygufuGJcgeD;a&mfbmAlaygif;uhJodkU vlem\_tltwufa&mifaeNyD; tcsdefrDrcGJpdyfrdygu trSefwu,f touftEÅ&m,fqHk;½HI;Edkifygonf/ usrqdkvdkcsifonfrSm tqdkygq&m0efBuD;onf vGefcJhaomESpfaygif; 30 cefUuxJu Scan, Ultrasound tultnDrvdkbJ rnfonfha&m*ga0'emvu©Pmudk odEdkifavmufatmif rdrd\_vkyfief;udk uRrf;usifwwfajrmufol wpfOD;bJjzpfygonf/
'kwd,tBudrfwGif rdcifjzpfol onf;ajctdwfwGif ausmufwnfygonf/ xdkenf;wlpGmyif ]]onf;ajctdwfudk vSD;jzwfxkwfjcif;udk}} AdkufcGJp&mrvdkbJ avqma&mifjcnfESifh enf;ynmukxHk;topf tqef;jzifh tqdkygq&m0efBuD;u atmifjrifpGm a&m*gukoEdkifcJhonfrSmvnf; uRefrwdkUvufawGUyJ jzpfygonf/ (txufygukorIrSwfwrf;udk video jzifh rSwfwrf;wifodrf;xm;cJhygonf/)
wwd,tBudrf usr\_ zcifjzpfol (tvGeftrif;usef;rmoefpGrf;aom? pm;EdkifaomufEkdifaom vlwa,mufjzpfygonf/) ½kwfw&ufacgif;rl;\_ naeapmif;tcsdefwGif SSC aq;½HkodkUa&mufcJhygonf/ wm0efus MO rS eD;pyf&m Specialist q&m0efBuD;wpfOD; (Dr. ) udk ac:,lygonf/ 4if;q&m0efBuD;onfvnf; emrnfBuD;cGJpdwfq&m0efwpfOD;jzpfygonf/ trnfrazmfjyvdkol specialist q&m0efBuD;rS vlemonf ta&;ay:cGJpdwf&efvdkaMumif; pojzifh ajymqkdí a&m*gtrnfwrsdK; ajymjy ygonf/ usr rrSwfrdawmhyg/ usrwdkUrdom;pkrSmvJ bmvkyf&rSef;rodjzpfaechJygonf/ acwfynmwwf wpfOD;jzpfaomfjim;vnf; cGJpdyfukojcif;udk tvGeftrif;pdkk;&drfaMumuf&GHUaom usr\_zcifjzpfolonf rdrd\_ a&m*gudk cGJpdyfuko&efjiif;qdkcJhygonf/
odkUjzpfygí specialist qdkol ([dwf[efyeftjynfhjzihf taemufwdkif;0wfpHkjynfhudk usepGm 0wfqif xm;ol)onf tvGeftrif;pdwfqdk;aom trlt&mjzifh jyefvnfxGufoGm;cJhNyD; wm0efus MO jzpfoltm; ]]'Dvlemrdom;pkxyfac:&if vHk;0rvmEdkifaMumif;}} pojzifh Budrf;armif;ajymqdkxGufoGm;oludk em;ESifh qwfqwf Mum;cJh&ygonf/
rnfuhJodkU qufvkyf&rSef;rodjzpfaepOfwGif usrwdkU\_ udk,fydkifqHk;jzwfcsufjzifh ,ckvufwavm rSm;,Gif;pGm aq;ukorIjzifh jyóemjzpfyGm;aeaom q&m0efBuD;udk aq;ukoay;yg&ef awmif;qdkcJhygonf/ vlem\_ cE¨mudk,ftm; (Scan) zwfjcif;? ultrasound ½dkufjcif;? qD;0rf;aoG;tp &SdonfwdkU vdktyfovdk ppfaq;rItNyD; q&m0efBuD;rS vlemcHae&aom a0'emrSm tonf;a&miftom;0g a&m*g B ydk;rSwqifh ul;pufNyD; tonf;uifqma&m*gjzpfaMumif; (6) vxufydkí oufwrf;&SnfEdkifrnf rxifaMumif;? EdkifiH&yfjcm;aq;½Hkrsm;wGif tonf;tpm;xdk;ukojcif; jyKvkyfvQif jzpfEdkifaomfvnf; raocsmaMumif; pojzifh pdwf&SnfpGm &Sif;vif;ajymjycJhNyD; &efukef taxGaxGaq;½HkBuD;rS Dr.aemfrefvS OD;pD;aom aq;q&m0eftzGJUodkU oGm;a&mufuko&ef tBuHOmPf ay;cJhygonf/ (tqkdygtcsdefwGif Dr. aemfrefvS ESifhtzGJUonf tonf;tpm;xdk;ukojcif;udk atmifjrifpGm jyKvkyfNyD;csdefjzpfygonf/)
usrwdkUvnf; rdrdvlem\_ a&m*g&if;Zif;jrpfudk aocsmpGm od&SdoGm;ojzifh qufvkyfoifhonfrsm;udk jyKvkyfcJhygonf/
odkU&mwGif uifqma&m*g[k qdkonfhtwdkif; rnfrQyif BudK;yrf;apumrl tcsnf;tEDS;omjzpfygonf/ usrwdkU\_ udk,fawGU tawGUtBuHKt& EdIif;,SOf&aomf ,ckaq;rSm;,Gif;ukorIjzpfyGm;aeaom tqdkyg q&m0efBuD;onf vGefcJhaomESpfaygif; 30 cefUu (scan, ultrasound r&SdcJhcifuwnf;u) 4if;\_aq;uko rItydkif;wGif tvGeftrif;uRrf;usifonfrSm - rnfokdUrS rjiif;y,fEdkifyg/ (wnfNidrfjcif;? at;aq;jcif;ESifh twl tjcm; specialist q&m0eftrsdK;om;rsm; taemufwdkif; suite tjynfhjzifh pwdkif[eftjynfh aq;ukoaecsdefwGif csnfxnfykqdk;0wfí at;aq;wnfNidrfaom q&m0efwpfOD;jzpfonf)udkawmh usr rjiif;Edkifyg/ 4if;\_ aq;½Hkywf0ef;usifrS pOf;pm;csifhcsdefwwfolrsm;u ydkrdkodEdkifrnf[k xifygonf/ uHMur®mudkbJ ,kdrnfzGJU&rnfvm; ? rnfodkU a0zef&rnfenf; ? um,uH&Sifrdom;pkbufrS awG;MunfhvQif vnf; rnfodkUcGifhvTwfrnfenf; ?
vGefcJhaomfESpfaygif; 30 cefUausmfuwnf;u od&Sd&if;ESD;ukoaeaom q&m0efBuD;yifvQif ,ckvdk trSm;rsdK;jzpfEkdifvQif usefq&m0efBuD;rsm;onfvnf; trSefwu,f aq;ukorIaumif;rGefEkdifyghrvm; ? temESifhaq;wjcm;pDjzpfaernfvm; ? rnfolUukd rnfonfhtwdkif;twmxd pdwfcs,HkMunf oifhygoenf;/ rnfodkUaom tajctaewGif rnfodkU qHk;jzwfcsufcsrnfenf;/ ]]um,uH&Sif^vlem&Sifrsm;rSm aum usef;rma&;todynmrnfrQ&Sdoenf;/}} odkUavm ..okdUavmjzifh wqufxJrSmyif ]]usrwdkUenf;wl vlOD;a&oef;aygif;rsm;pGm aexdkifaom tjcm;wdkif;jynfrsm;wGif rnfuJhodkUaom jynfolUusef;rma&; apmifha&SmufrIrsm;&Sdygoenf; ?
]]jynfolrsm;udk udk,fwdkifuvnf; rnfrQtxd usef;rma&;todynmrsm;&Sdygoenf;? rdrd ukd,fwdkifvJ rnfonfhtwdkif;twmtxd usef;rma&;tod&Sdygoenf;? qdkaomf ar;cGef;udk ar;&if; - usef;rma&;todynmudk rnfuJhodkU &SmazGrnfenf;? rdrdrSmaumwm0ef&Sdygovm;? rnfolwdkUwGif wm0ef &Sdygoenf;? qufawG;&if;jzifh 0ifvmaom ar;cGef;rsm;onf wdkif;jynfwpfckwGif jynfolrsm;\_ usef;rma&; ynma&; tm;vHk;twGuf rnfolwdkUwGif wm0ef&SdygovJ/ rdrdudk,fwkdifvm; ...? ........?
CHAWCHAW - ရေ ဒီထဲမှာ Zawgyi one နဲ့ပဲ ဗမာလိုပေါ်တယ်။ Win-နဲ့ စတဲ့ Font တွေနဲ့ မပေါ်ဘူး။ ဇော်ဂျီနဲ့ ပြန်ရိုက်လိုက်ပါ။
(အထက်က CHAW CHAW ရေးတဲ့ အင်းဝကို ဇော်ဂျီအဖြစ် ပြောင်းပေးပါတယ်။ ကျနော်ရေးတာ မဟုတ်ပါ။ ကံကောင်းထောက်မလို့ ဖတ်မိကြပါစေဗျား။)
]]ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တပါး}}ဆိုတဲ့ စကားဟာ ယခုခေတ်အခါမှာ ပိုပြီးတန်ဘိုးရှိလာပါပြီ။ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျမတို့မိသားစုအတွေ့အကြုံလေးများကို တင်ပြချင်ပါတယ် -
၁၉၈၂ ခုဝန်းကျင်ခန့်တွင် ပထမဦးဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် မိသားစုဝင်ထဲမှ ညီမဖြစ်သူ ညနေစောင်းခန့် အချိန်တွင် ဗိုက်အောင့်၊ ဗိုက်နာဖြစ်သဖြင့် ရန်ကုန်ပြည်သူဆေးရုံကြီးသို့ ရောက်ရှိခဲ့ရပါသည်။ (အဆိုပါခေတ် အခါကှခညေ ဖတ်ခြင်း၊ ကူအမျေသကညိ ရိုက်ခြင်းများခေတ် မစားသေးပါ။ မရှိသေးပါဟု ပြောလျှင် ပိုမှန်ပါမည်) ယခုတလောအချိန်တွင် မှားယွင်းစွာဆေးကုသမှုဖြင့် ပြဿနာဖြစ်ပွားနေသောအဆိုပါ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး၏ အပြင်ပိုင်းလက်ထိတွေ့စမ်းသပ်ချက်ဖြင့်သာ ရဲဝင့်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချ၍ လူနာသည် အစာအိမ်အူအတက်ပေါက် ခါနီးအခြေအနေဖြစ်သဖြင့် ခွဲစိပ်ကုသရန်လိုကြောင်း ပြောကြား၍ ခွဲစိပ်ကုသခဲ့ရပါသည်။ အမှန်တကယ်ပင် ပေါက်ကွဲခါနီးရော်ဘာဗူပေါင်းကဲ့သို့ လူနာ၏အူအတက်ရောင်နေပြီး အချိန်မီမခွဲစိပ်မိပါက အမှန်တကယ် အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ ကျမဆိုလိုချင်သည်မှာ အဆိုပါဆရာဝန်ကြီးသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀ ခန့်ကထဲကှခညေယ့ူအမျေသကညိ အကူအညီမလိုဘဲ မည်သည့်ရောဂါဝေဒနာလက္ခဏာကို သိနိုင်လောက်အောင် မိမိ၏လုပ်ငန်းကို ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်သူ တစ်ဦးဘဲဖြစ်ပါသည်။
(Cont.. Chawchaw's comment converting fr INNWA to Zawgyi)
ဒုတိယအကြိမ်တွင် မိခင်ဖြစ်သူ သည်းခြေအိတ်တွင် ကျောက်တည်ပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် ]]သည်းခြေအိတ်ကို လှီးဖြတ်ထုတ်ခြင်းကို}} ဗိုက်ခွဲစရာမလိုဘဲ လေဆာရောင်ခြည်နှင့် နည်းပညာကုထုံးအသစ် အဆန်းဖြင့် အဆိုပါဆရာဝန်ကြီးက အောင်မြင်စွာ ရောဂါကုသနိုင်ခဲ့သည်မှာလည်း ကျွန်မတို့လက်တွေ့ပဲ ဖြစ်ပါသည်။ (အထက်ပါကုသမှုမှတ်တမ်းကို လငိနသ ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်သိမ်းထားခဲ့ပါသည်။)
တတိယအကြိမ် ကျမ၏ ဖခင်ဖြစ်သူ (အလွန်အမင်းကျန်းမာသန်စွမ်းသော၊ စားနိုင်သောက်နိုင်သော လူတယောက်ဖြစ်ပါသည်။) ရုတ်တရက်ခေါင်းမူး၏ ညနေစောင်းအချိန်တွင်ှဃ ဆေးရုံသို့ရောက်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်ကျြဥ မှ နီးစပ်ရှာစနခငေူငျအ ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦး (ီမ. ) ကို ခေါ်ယူပါသည်။ ၄င်းဆရာဝန်ကြီးသည်လည်း နာမည်ကြီးခွဲစိတ်ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ အမည်မဖော်ပြလိုသျူစနခငေူငျအ ဆရာဝန်ကြီးမှ လူနာသည် အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ရန်လိုကြောင်း စသဖြင့် ပြောဆို၍ ရောဂါအမည်တမျိုး ပြောပြ ပါသည်။ ကျမ မမှတ်မိတော့ပါ။ ကျမတို့မိသားစုမှာလဲ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။ ခေတ်ပညာတတ် တစ်ဦးဖြစ်သော်ငြားလည်း ခွဲစိပ်ကုသခြင်းကို အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့သော ကျမ၏ဖခင်ဖြစ်သူသည် မိမိ၏ ရောဂါကို ခွဲစိပ်ကုသရန်ငြင်းဆိုခဲ့ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ျစနခငေူငျအ ဆိုသူ (ဟိတ်ဟန်ပန်အပြည့်ဖြင့် အနောက်တိုင်းဝတ်စုံပြည့်ကို ကျနစွာ ၀တ်ဆင် ထားသူ)သည် အလွန်အမင်းစိတ်ဆိုးသော အမူအရာဖြင့် ပြန်လည်ထွက်သွားခဲ့ပြီး တာဝန်ကျြဥ ဖြစ်သူအား ]]ဒီလူနာမိသားစုထပ်ခေါ်ရင် လုံးဝမလာနိုင်ကြောင်း}} စသဖြင့် ကြိမ်းမောင်းပြောဆိုထွက်သွားသူကို နားနှင့် ဆတ်ဆတ် ကြားခဲ့ရပါသည်။
မည်ကဲ့သို့ ဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေစဉ်တွင် ကျမတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ယခုလက်တလော မှားယွင်းစွာ ဆေးကုသမှုဖြင့် ပြဿနာဖြစ်ပွားနေသော ဆရာဝန်ကြီးကို ဆေးကုသပေးပါရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ လူနာ၏ ခန္ဓာကိုယ်အား (ှခညေ) ဖတ်ခြင်း၊ ကူအမျေသကညိ ရိုက်ခြင်း၊ ဆီးဝမ်းသွေးအစ ရှိသည်တို့ လိုအပ်သလို စစ်ဆေးမှုအပြီး ဆရာဝန်ကြီးမှ လူနာခံနေရသော ဝေဒနာမှာ အသည်းရောင်အသားဝါ ရောဂါြ ပိုးမှတဆင့် ကူးစက်ပြီး အသည်းကင်ဆာရောဂါဖြစ်ကြောင်း (၆) လထက်ပို၍ သက်တမ်းရှည်နိုင်မည် မထင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြားဆေးရုံများတွင် အသည်းအစားထိုးကုသခြင်း ပြုလုပ်လျှင် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း မသေချာကြောင်း စသဖြင့် စိတ်ရှည်စွာ ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပြီး ရန်ကုန် အထွေထွေဆေးရုံကြီးမှီမ.နော်မန်လှ ဦးစီးသော ဆေးဆရာဝန်အဖွဲ့သို့ သွားရောက်ကုသရန် အကြံဥာဏ် ပေးခဲ့ပါသည်။ (အဆိုပါအချိန်တွင်ီမ. နော်မန်လှ နှင့်အဖွဲ့သည် အသည်းအစားထိုးကုသခြင်းကို အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်ပြီးချိန်ဖြစ်ပါသည်။)
ကျမတို့လည်း မိမိလူနာ၏ ရောဂါရင်းဇင်းမြစ်ကို သေချာစွာ သိရှိသွားသဖြင့် ဆက်လုပ်သင့်သည်များကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
သို့ရာတွင် ကင်ဆာရောဂါဟု ဆိုသည့်အတိုင်း မည်မျှပင် ကြိုးပမ်းစေကာမူ အချည်းအနှီးသာဖြစ်ပါသည်။ ကျမတို့၏ ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံအရ နှိုင်းယှဉ်ရသော် ယခုဆေးမှားယွင်းကုသမှုဖြစ်ပွားနေသော အဆိုပါ ဆရာဝန်ကြီးသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀ ခန့်က (ျခညေယ ကူအမျေသကညိ မရှိခဲ့ခင်ကတည်းက) ၄င်း၏ဆေးကုသ မှုအပိုင်းတွင် အလွန်အမင်းကျွမ်းကျင်သည်မှာ - မည်သို့မှ မငြင်းပယ်နိုင်ပါ။ (တည်ငြိမ်ခြင်း၊ အေးဆေးခြင်းနှင့် အတူ အခြာျးစနခငေူငျအ ဆရာဝန်အမျိုးသားများ အနောက်တိုင်ျးကငအန အပြည့်ဖြင့် စတိုင်ဟန်အပြည့် ဆေးကုသနေချိန်တွင် ချည်ထည်ပုဆိုးဝတ်၍ အေးဆေးတည်ငြိမ်သော ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်သည်)ကိုတော့ ကျမ မငြင်းနိုင်ပါ။ ၄င်း၏ ဆေးရုံပတ်ဝန်းကျင်မှ စဉ်းစားချင့်ချိန်တတ်သူများက ပိုမိုသိနိုင်မည်ဟု ထင်ပါသည်။ ကံကြမ္မာကိုဘဲ ယိုမည်ဖွဲ့ရမည်လား ၊ မည်သို့ ဝေဖန်ရမည်နည်း ၊ ကာယကံရှင်မိသားစုဘက်မှ တွေးကြည့်လျှင် လည်း မည်သို့ခွင့်လွှတ်မည်နည်း ၊
လွန်ခဲ့သော်နှစ်ပေါင်း ၃၀ ခန့်ကျော်ကတည်းက သိရှိရင်းနှီးကုသနေသော ဆရာဝန်ကြီးပင်လျှင် ယခုလို အမှားမျိုးဖြစ်နိုင်လျှင် ကျန်ဆရာဝန်ကြီးများသည်လည်း အမှန်တကယ် ဆေးကုသမှုကောင်းမွန်နိုင်ပါ့မလား ၊ အနာနှင့်ဆေးတခြားစီဖြစ်နေမည်လား ၊ မည်သူ့ကို မည်သည့်အတိုင်းအတာထိ စိတ်ချယုံကြည် သင့်ပါသနည်း။ မည်သို့သော အခြေအနေတွင် မည်သို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမည်နည်း။ ]]ကာယကံရှင်^လူနာရှင်များမှာ ကော ကျန်းမာရေးအသိပညာမည်မျှရှိသနည်း။}} သို့လော ..သို့လောဖြင့် တဆက်ထဲမှာပင် ]]ကျမတို့နည်းတူ လူဦးရေသန်းပေါင်းများစွာ နေထိုင်သော အခြားတိုင်းပြည်များတွင် မည်ကဲ့သို့သော ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများရှိပါသနည်း ၊
]]ပြည်သူများကို ကိုယ်တိုင်ကလည်း မည်မျှအထိ ကျန်းမာရေးအသိပညာများရှိပါသနည်း၊ မိမိ ကိုယ်တိုင်လဲ မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ကျန်းမာရေးအသိရှိပါသနည်း၊ ဆိုသော် မေးခွန်းကို မေးရင်း - ကျန်းမာရေးအသိပညာကို မည်ကဲ့သို့ ရှာဖွေမည်နည်း၊ မိမိမှာကောတာဝန်ရှိပါသလား၊ မည်သူတို့တွင် တာဝန် ရှိပါသနည်း၊ ဆက်တွေးရင်းဖြင့် ၀င်လာသော မေးခွန်းများသည် တိုင်းပြည်တစ်ခုတွင် ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေး ပညာရေး အားလုံးအတွက် မည်သူတို့တွင် တာဝန်ရှိပါသလဲ။ မိမိကိုယ်တိုင်လား ...၊ ........၊
chaw chaw and Bravo
ငယ်နိုင်ပို့ စ်မှာ ကွန်မင့်တင်ထားတယ် သွားသာဖတ်ကြတော့
ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းတွေက ဈေးအများကြီးယူတာသိရက်နဲ့ အဲဒီမှာပဲပြချင်တဲ့ ပိုက်ဆံရှိတဲ့ လူတွေ ကအများကြီးပဲ။
ဆရာဝန်တွေကိုတော့ ကောင်းကောင်းဂရုမစိုက် ဘူးလို့ပြောကြတယ် ။ တခြားနေရာမှာ
တရားသူကြီးတွေ ရှွေ့နေတွေ က မတရား အနိုင်ကျင့် အကျင့်ပျက်ခြစားနေတာတွေကိုတော့ မဖော်ထုတ်ရဲကြဘူးနော်
တော်တော်ကို ကောင်းလိုက်တဲ့မီဒီယာတွေ ဟဲဟဲ လေးစားပါ၏ မီဒီယာသမားများခင်ဗျား။
မြန်မာပြည်မှာ အစိုးရဆေးရုံတွေမှာ လဲအခမဲ့ ကုသသင့်ပေးသင့်ပါတယ်တဲ့ ဟဲဟဲ။
အဲဒီလူကတော့ အခြောက်တိုက် နိုင်ငံခြားအထင်ကြီးနေသူပဲပေါ့ဗျာ။ ဆေးတစ်လုံး ကို ဘယ်လောက်တန်ဖိုး ပေးရတယ်ဆိုတာ မသိတတ်တဲ့ ဦးနှောက်မရှိတဲ့သူ ဖြစ်လောက်တယ်။
နိုင်ငံခြားမှာ ဆေးကုဖို့ ပိုက်ဆံတွေကို ဘယ်လိုရှာလဲသိဖို့ကောင်းတယ်။ ဘယ်န်ုင်ငံမှ တကယ်တမ်း အလကားကုမပေးဘူး သိလား။ မြင်ကောင်းကြားကောင်းအောင် အလကား ကုတယ်လို့ပြောတာ။ အလကားဆေးပေးတယ်ပြောတာ
အခု မြန်မာပြည်မှာ အစိုးရဆေးရုံတွေမှာ ကုနေတာက စရိတ်မျှပေးကျန်းမာရေးစနစ်ကွ။ တိုင်းပြည်တစ်ခု ကို အဘက်ဘက်က ပြည့်စုံအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဆေးကိုပဲ အလကားကုပေးနေရင် တခြားနေရာမှာသုံးဖို့ ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဆေးကုပေးပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးဖို့ တို့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ ကို ဒီအတိုင်းပစ်ထားမှာလားဟ။
သူများနိုင်ငံတွေမှာ ဝင်ငွေခွန်တွေ သေလောက်အောင်ပေးနေရတာ။ ငါတို့နိုင်ငံမှာ ရော ကိုယ်ရတဲ့ပိုက်ဆံ ကို အစိုးရကို ဝင်ငွေခွန်သေလောက်အောင်ပေးနေ၇လား။ ဝင်ငွေခွန်ဆို တာ ပြည်သူတွေက ပေးသင့်သောအရာဆိုတာကို မုကားဖူးတဲ့သူတောင်ရှိတယ်။
နိုင်ငံခြားမှာ ဆေးရုံမှာ ကု၇င်လဲ ဆရာဝန်ကို ပေးရတယ်။
မြန်မာပြည်က လူနာတွေ အစိုးရဆေးရုံမှာ ကု တော့ ဆရာဝန်ကို ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုဘူး ။ ဆေးရုံတက်ရတဲ့ ကု တင်ဖိုး ပေးစရာမလိုဘူး။ ကိုယ့်အတွက် ဆေးဖိုးကိုယ်ခံယုံပဲ။ ဆရာဝန်တွေက နှစ်ဆယ့်လေးနာရီ အပြည့်ရှိတယ်။ အဲတစ်ခု့ရှိတယ် တစ်ချို့ လူနာတွေက သူတို့ကို နှစ်ဆယ့်လေးနာရီလုံးလုံးကြည့်ပေးစေချင်တယ် အဲဒါ အတ္တ သမားတွေပဲ ။ သူတို့လူနာကို လူနာစောင့်တွေက တောင် တစ်နာရီလောက်အနားမှာ နေမပေးနိုင်ဘူး။ ဆရာဝန်က ဒီလူနာတစ်ယောက်ထဲ ကြည့်ရမှာ မဟုတ်ပဲ။ ဆေးရုံ မှာ လူနာတွေအများကြီး။ ဆေးရံ့မှာ ဘိုကျလို့မရဘူး။ ဘယ်လူနာ့အဘို့း ကမှစေတနာ စေသတိတ်အပြည့်နဲ့ ဆရာဝန်တွေကို လခပေးမထားဘူး။ အစိုးရကလဲ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က နေ ပြည်သူတွေကိုလုပ်ပေးနေတယ်။
ဆရာဝန်တွေကလဲ မဖြစ်ဖြစ်အောင်လူနာတွေကိုကုပေးကြရဲ့။ လူနာမတတ်နိုင်ရင် အိတ်စိုက်တတကြတယ် ။ ညတွေအိပ်ရေးပျက်ခံပြီး ကုပေးနေရတယ်။ သူတို့ ကိုရော အ၇မ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ဘယ်လူနာကပြောဖူးလဲ။
တစ်ချို့လူနာတွေဆို မသိတတ်တာတွေရှိတယ်။ထားလိုက်ပါတော့ ဆရာဝန်ဆို တာ အနစ်နာခံရမယ်လို့ ပြည်သူတွေက သိထားတယ်။ သူတို့ မှာ ဘဝနဲ့လဲရင်းရ၊ ပိုက်ဆံလဲရင်းရ၊ ခွန်အားလဲစိုက်ရ၊ ဘယ်သူတွေက အဲလိုလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲ။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်အခြေအနေနဲ့ ကိုယ်ရနေတာက တန်ယုံတင်မကဘူး လွန်နေတယ်။ ငါတို့ပြည်သူတွေက တိုင်းပြည်က ဘာလုပ်ပေးမလဲဆို တာကိုပဲ မျှော်လင့်နေကြတယ်။ တိုင်းပြည်ကို ဘာတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကို မစဉ်းစားကြဘူး.. လိုချင်တာပဲသိတယ်။ ပေးဖို့ မေ့ကြတယ်....နုိင်ငံခြားမှာ အလကားဘာရသလဲ ..အဲလိုရအောင် ဘယ်လောက်ပေးထားရသလဲ ဟဲဟဲ သိအောင်ကြိုစားစေချင်ပါတယ်...ငနုံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ သိမှာပါ....
သမားအို ရဲ့ စာသားအချို့ ကိုမကြိုက်လို့ ရေးလိုက်တာပါ ....
နိုင်ငံခြားမှာ ဆေးအလကားကိုပေးဖို့ ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကို တစ်ယောက်က ရေးတင်ထားတယ်ဗျာ...ဖတကြည့်စေချင်တယ်..ပြီးမှ စဉ်းစား....အော် ငါတို့ ကံကောင်းလှပါလားလိုမြင်လာလိမ့်မယ်....အထူးကုဆေးခန်ုးကီးမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ်စ ကိုတော့မပြောချင်ပါဘူး...ကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြမယ်...ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုပါဗျာ......အမှုသည်တစ်ယောက်က ရှေ့နေတစ်ယောက်ကို အယူခံအမှုကို တင်ပေးဖို့ အပ်တယ်...ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီရှေ့နေက ပြောတယ်...
သူ့အတွက် အယူခံတင်သွင်းစာ ရေးတင်တာကို ငါးသိန်း ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်...နောက်ပိုင်း အယူခံခွင့်ကျလာရင် ထပ်ထပ်ပြီးပေးရမယ်တဲ့ဗျာ.......ဟဲဟဲ တော်တော်လေးကို စာနာတတ်တဲ့ ရှေ့နေနော် ...အဲလိုရှေ့နေက ဟော စေတနာအပြည့်နဲ့ အလှူ ကြီးပေးတယ်ဗျာ ဟဲဟဲ ခင်ဗျားတို့ သာဓုခေါ်မလား..နောက်တစ်ခုက ..အမှုဖြစ်နေရင် လူတစ်ယောက်ကို ထောင်ချချင်ရင် တစ်သ်ိန်းပေးရတယ်.....ချချင်တဲ့နှစ်ကိုလိုက်ပြီးဈေးကွာတယ်...ဟဲဟဲ မီဒီယာုကီးများခင်ဗျား အဲဒါတွေကိုကော
မဖော်ထုတ်ကြဘူးလားဗျ အဟားဟား ကောင်းကောင်းကွန်မန့်ပေးနိုင်ကြပါစေဗျား
ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ရှင်က မသိဘူးဆိုတော့ မြန်မာပြည်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာများ
ရောက်နေလို့ပါလား....ဂျာနယ်တစ်စောင်ဖြစ်လာဖို့ ဘယ်နေရာတွေကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းရတယ်ဆိုတာ တကယ်ကိုမသိတာလား...ရှင်ပြောတဲ့သတင်းကိုရေးတင်လိုက်ပါပြီတဲ့...ဒီသတင်းက ပြန်ကျလာမယ် ...ထုတ်ဝေခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါသလား...မီဒီယာတိုင်းဟာ သတင်းတိုင်းကိုဖော်ပြချင်တဲ့စိတ်ရှိကြမှာပါ..တစ်ချို့သတင်းသမားများဟာ risk တွေအများကြီးရှိတဲ့ကြားက စွန့်စားပြီးသတင်းလိုက်ကြရင်း
လူနေမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ သီးသန့်နေရာတွေကိုရောက်သွားကြတာကို ကြားဖူးလိုက်ပါရဲ့လား...ဒါကြောင့်ဘယ်လိုသတင်းမျိုးကိုတော့မဖော်ပြဘူး..ဘယ်လိုသတင်းကိုတော့ မလိုက်ကြဘူးလို့ မပြောသင့်ပါ...မီဒီယာသမားတွေမှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာလေးပါ ထည့်သွင့်စဉ်းစားပေးလိုက်ပါ...
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်မအသိထဲမှာရောမိတ်ဆွေထဲမှာပါ
မြန်မာပြည်ရဲ့ ၀င်ငွေစုစုပေါင်းမှာ ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဘယ်လောက်
ငွေပမာဏရဲ့တစ်ချို့တစ်ဝက်ကိုသာ ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေမှာ သုံးစွဲလိုက်ပါ..အခုထက်အများကြီး ပိုမိုကောင်းမွန်လာမဲ့အနာဂတ်တွေကိုမျှော်မှန်းလို့
အ၀င်နက်နေကြတာမျိုးဆိုရင်တော့ မပြောလိုပါ...ပြီးတော့ လူနာတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်ကုသပေးလိုက်တဲ့ဆရာဝန်တွေကို ကျေးဇူးတင်ကြပါတယ်..ဘယ်သူကမှကျေးဇူးတင်ရကောင်းမှန်းနားမလည်တဲ့သူတွေမရှိကြပါဘူး..ဆရာဝန်တွေကိုကျေးဇူတင်ကြောင်းပြောတဲ့
ဒါဟာ ဆရာဝန်ကြီးပိုက်ဆံရှိလို့မဟုတ်ဘဲ သူ့ရဲ့လူနာတွေအပေါ်ထားတဲ့စေတနာကြောင့်ပါ...မှန်လိုဘဲ ရောင်ပြန်ဟပ်ပါတယ်...ပြုံးပြတဲ့သူကိုမှန်ကပြန်ပြုံးပြသလိုဘဲမဲ့ပြသူကို မှန်ကလဲပြန်မဲ့ပြတာပါ...ပြီးတော့ ဒီမှာ လာပြီးရေးကြတဲ့သူတွေက ဆရာဝန်အားလုံး
မကောင်းဘူးလို့ သိမ်းကြုံးပြီး ဘယ်သူကမှမပြောကြဘူး...ကိုယ်ကြုံခဲ့တဲ့နေရာက အဖြစ်အပျက်တွေကိုသာပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
ဆရာဝန်ထုတစ်ရပ်လုံးကိုမရည်ရွယ်ဘဲ နာမည်ထွက်နေသော နာမည်ပျက်နေသော ငွေအရှာကောင်းကြသောတစ်ချို့တစ်ချို့သော သူများကိုသာဆိုလိုပါတယ်လို့ ခွဲခြားပြီးနားလည်ပေးလိုက်ရင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ...လူဆိုတာ ကိုယ့်လက်ရှိနေရာမှာ အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်... စိတ်စေတနာကောင်းထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်..စေတနာရောင်ပြန်ဟပ်မှာပါ....
violet ပြောတာကိုထောက်ခံပါတယ်။ဆရာဝန်အားလုံး မကောင်းဘူးလို့ပြောတာ မဟုတ်ကြပါဘူး။ပဲတောင်းထဲက မကောင်းတဲ့ ပဲအကြောင်းပဲပြောတာပါ။တတောင်းလုံးမကောင်းဘူးလို့ တစ်ခုမှ မပါပါဘူး။စေတနာထားပြီး ကုပေးတဲ့ ဆရာဝန်တွေလည်းအများကြီးပါ ဒါတွေဖြစ်လာကြတာကတော့ လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
မှန်သည်မှားသည် ကောင်းသသည်ဆိုသည် ဆိုသည်ကား ရှုထောင့်အပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားတတ်သည်ပါတကား
ပေးတဲ့ ဆရာဝန်ရှိသလို အထူးကုပေမယ့် လူနာကို ဂရုစိုက်ချင်မှစိုက်တာ တွေလည်းရှိပါတယ်။ကိုပြည်စိုး ကို
တစ်ခုလောက်တော့ပြောချင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာ တကယ်ပဲ ရသင့်တာထက်ကို ပိုနေတာလား လိုနေတာလား ဆိုတာကို အစိုးရဆေးရုံတွေမှာ အစ်ကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် တော့ အစ်ကို နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်၏ ကျန်းမာရေး infrastructure သည် အလွန်နိမ့်ကျလျက်ရှိပါသေးသည်။ လက်ရှိထက်ကောင်းအောင် လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းတွင် (လူမှန်ရင်ပေါ့လေ) တာဝန်ရှိပါသည်။ ပြည်သူတို့အတွက် လုံးဝ မလုံလောက်ပါ။ physical infrastructure မရှိဘဲ health human resource development ကို ဘယ်လိုမှ မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ထိုအတွက် political commitment နဲ့ economical support သည် အဓိက အကျဆုံးဖြစ်ပါသည်။
SSCမှာမှားခွဲမိလို့ သေသွားတယ်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးဖြစ်ရပ်ပါ။
ကောင်မလေးသေဆုံးရမှုအပေါ် တကယ်ကိုပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် ။တကယ်ကို တော်တဲ
့ကလေးတယောက်မို့ လို့ ပါ။ ဒါပေမဲ့ ခွဲတဲ့ ဆရာကြီး အပြစ်လို
့ဝိုင်းပြောနေကြတဲ့ ဂျာနယ်လစ်တွေကို တော့ တကယ်ကိုစိတ်တိုမိပါတယ်။
ဆရာကြီးဦးကြည်စိုး ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်ယောက်မရှိနိုင်တဲ့ surgeon
တယောက်ပါ။ ဆေး (၁)၊ ဆေး (၂) စတဲ့ ဆေးကျောင်းတွေမှာ
head and professor ရာထူးနဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့
့ပြီး အခု retire ယူထားတဲ့ surgeon ဘိုးအေကြီးတယောက်ပါ။
အခုဖြစ်ရပ်မှာလည်း တကယ်တန်းတာဝန်ရှိတာ ကောင်မလေးကို စဖျားကတည်းက
ကုတယ်ဆိုတဲ့GPဆရာဝန်ပါ။ သူဟာ ဆရာဝန်တယောက် ဖြစ်ပါရဲ့ နဲ့သူ
့ဆီလာပြတဲ့ လူနာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဆိုတာ diagnose မလုပ်နိုင်တာ သူ့ ညံ
့ဖျင်းမှုပါ။ ကောင်မလေးက လေးရက်တောင်ဖျားပြီးမှ ဆရာ ဦးကြည်စိုး
ဆီရောက်တာပါ။ လူနာက ဆရာကြီးဆီ ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ dengue shock
၀င်နေပါပြီ။ ပြီးတေ့ာကောင်မလေးမှာပြနေတဲ့ sign တွေ က appendicitis case
နဲ့တထပ်တည်းကိုတူနေတာပါ။ ဗိုက်ကြီးပူတာ၊ ချက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နာတာ
၊သွေးကြောတွေဝမ်းဗိုက်မှာ မြင်နေရတာ အူအတက်ပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ (appendicitis)
ရဲ့ sign တွေပါပဲ။ အူအတက်ပေါက်တယ်ဆိုတာ ချက်ချင်းခွဲ မှဖြစ်မှာပါ။
အဲဒါကို လူပိန်းတောင်သိပါတယ်။ မှားတတ်ပါတယ် ၊ဆရာကြီးနေရာမှာ
တခြားနာမည်ကြီးဆရာဝန်တယောက် ဆိုလည်း မှားမှာပါပဲ။
အူအတက်ပေါက်တာအမှန်ဆိုရင် ချက်ချင်းခွဲ မှဖြစ်မယ့် အတွက်
စစ်ချိန်မရတာဆိုရင် ပိုမှန်ပါမယ် ။ လူနာက ဆရာကြီးဆီ ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ
သေကိုသေတော့မယ့် အခြေအနေပါ။ စစ်ပြီး dengueမှန်းသိလို့ မခွဲရင် လည်း
မခွဲလို့ သေတယ်ဆိုပြီး ဖြစ်လာဦးမှာပါ။ အဲဒီတော့ ဘယ်သူ့ အမှားလည်း
ဆိုတာသာတွေးကြည့် ပါတော့ ။ ပြီးတော့နောက်တခုက ဆရာကြီးက လူနာကို တခါပဲ
လာကြည့် ပြီး ၊လက်လွတ်စပါယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ။ ဆရာကြီးဟာ
ဒီလူနာရောက်မလာခင် တပတ်လောက်အလိုကတည်းက တရုတ်ကိုသွားဖို့well planned
လုပ်ထားပြီးသားပါ။ လူနာရှင်တွေက ဆရာဦးကြည်စိုးနဲ့ မှ ကုချင်တယ် ဆိုပြီး
by name နဲ့ ရောက်လာတာပါ။ သူ တို့ ပြထားတဲ့GP ဆ၇ာဝန်က appendicitis
case ဖြစ်လို့ ဆရာကြီးနဲ့ သွားပြပါဆိုပြီးလွှတ်လိုက်လို့ဆရာကြီးက
ခရီးမထွက်ခင်လေး operation လုပ်ပေးခဲ့ တာပါ။ ပြီးတော့လူနာဆုံးပါးသွားတဲ
့အချိန်မှာလည်းဆရာကြီးက တရုတ်မှာပါ။ သူ့ ကနဂိုတည်းက အစီအစဉ်ရှိပြီးသား
ခရီးစဉ်ကိုသွားတာပါ။ ဒီမှာဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတာ သူ ကဒီလူနာကိုမကြည်
့ပေးနိုင်ခဲ့ တာလဲ ဒါကြောင့်ပါ။ ဆိုချင်တာက ဆရာကြီးကခွဲလိုက်လို့ 
သေရတာမဟုတ်ပါဘူး။ သေမည့် လူနာကို ဆရာကြီးကခွဲမိသွားတာပါ။ ပြီးတော့
ဆေးရုံစရိတ် ၁၁ သိန်းဆိုတာကလည်း ၁၁သိန်းနဲ့ တန်အောင်လုပ်ပေးတဲ
့ဆေးရုံကိုသွားလို့ ၁၁သိန်းကုန်တာပါ ။ ၁၁သိန်းကုန်အောင် ၀န်ဆောင်မှုပေးခဲ
့လို့တန်သလောက်ပေးရတာပါ။ အဲဒါကို weekly eleven ဂျာနယ်မှာ ရေးထားတာတွေက
တကယ်ကို ဆိုးဝါးပါတယ်။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ အဲဒီဂျာနယ်တိုက်ပိုင်ရှင်က
ဒေါက်တာသန်းထွန်းအောင် ဖြစ်ပြီး ၊ သူဟာ အာရှတော်ဝင်ဆေးခန်းရဲ့ 
ရှယ်ယာဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ SSC ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ
့အကောင်းဆုံးပြင်ပဆေးခန်းတွေထဲမှာမှTOP ပါ။ ၀င်ငွေအနေနှဲ့ လည်း
အကောင်းဆုံးဆေးခန်းတခုပါ။ အဲဒါကြောင့်အာရှတော်ဝင် နဲ့ SSC
ဟာအပြိုင်သဘောမျိုးဖြစ်နေတာပါ။ အခုဖြစ်ရပ်မှာလည်း လူနာသေဆုံးခြင်း ထက်
ဆရာကြီးကို အသုံးချကာ SSCဆေးခန်းအား တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်မသိတဲ့ ပြည် သူလူထုကိုထင်ယောင်မှားတွေ ဖြစ်အောင်သွေးထိုးလှုံ
့ဆော်ကာ စီးပွားရေး အရတိုက်ခိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဂျာနယ်တိုက်ပိုင်ရှင်ကိုလည်း အတော်ကိုအံ့ သြမိပါတယ်။
ရေးသားထုတ်ဝေရဲ တာ ဆရာဝန်စိတ်ဓာတ်မရှိခြင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဆရာဝန်မျိုးနှင့် ကုသမည့် လူနာများအတွက်လည်း ရင်လေးမိပါတယ်။ ကြားထဲက
ဓားစာခံ ဖြစ်သွားရတဲ့ ဆရာကြီးဦးကြည်စိုးမှာလည်း နာမည်ဂုဏ်ထိခိုက်ရသည်။
ဆရာကြီးအတွက် ဆမ အပိတ်ခံရခြင်းသည် ဆရာကြီး၏ အခြားသောစီးပွားရေး
များကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိပေ။ အခုဆရာကြီးက နိုင်ငံရပ်ခြားသို
့ထွက်ခွာသွားလေပြီ။ သူ့ လို လူတော်တယောက်အတွက် နိုင်ငံခြားဆိုတာ
၀င်ငွေပိုကောင်းပါတယ်။ သူ့ ဘ၀တက်လမ်းပိုကောင်းတဲ့ နိုင်ငံခြားမှာမနေပဲ၊
မြန်မာနိုင်ငံကို အလုပ်အကျွေးပြုနေတာဆရာကြီးရဲ့ စေတနာပါ။ တကယ်လို
့သင်ဆိုလျှင်ကော နိုင်ငံအတွက်ဆိုပြီး အနစ်နာခံနိုင်မလား ။
ဒီလိုလူတယောက်ကို ၀ိုင်းဝန်းနှင်ထုတ်လိုက်ခြင်းမှာ ဘယ်လို
အကျိုးကျေးဇုူးတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ။ စဉ်းစားကြည့် ပါ။ တကယ်တမ်းနစ်နာတာ
ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေပါ။ အဲဒါကိုကောင်းမှန်းမသိ ၊ဆိုးမှန်းမသိ
သူတပါးကိုပုတ်ခတ်လိုက်ရလျှင်ပဲ ငါဟဲ့ ဆိုပြီးဖြစ်နေတဲ့ လူ
့အောက်တန်းစား၊လူပြိန်း၊လူညံ့ များအား ကျွန်မတို့ ဆေးလောကအသိုင်းအ၀ိုင်းက
သနားတယ်လို့ ပြောပြီးဟားတိုက်တောင် ရယ်ချင်ပါသေးသရှင်။
အိုင်ဆေး ဒီကကွန်မင့်တွေ ဖတ်တော့မှ ဆရာဝန်တွေ ရဲ့ဆိုးချက်ကို ကောင်းကောင်းသိရတော့တယ်။ ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စကလည်း တကယ့် စိတ်ထိခိုက် စရာ၊ လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့ ချောမောလှပတဲ့ မိန်းမငယ်လေး ဆိုတော့ လူထုကြီးက အီမိုးရှင်းနယ် ဖြစ် တာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ နော် ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ခံစားမိကြတာပေါ့။ ခံစားလာ ကြရ တာ လည်းများပြီကိုး။ ခံစားလာကြရတာ များတော့ ပေါက်ကွဲမှာဘဲလေ။
ကျုပ်လည်း တခါကကြုံဘူးတာလေး တခုပြောပြချင် တယ် အဲဒါလည်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးပါဘဲ၊ ထုံးစံအတိုင်း (ထုံးစံအတိုင်း ဆိုတာ မြန်မာ ပြည် လူဦးရေရဲ့ ၈၀-၉၀ % သောဆင်းရဲသား ပြည်သူတွေ မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အတိုင်း) အချိန် နှောင်းပြီး ဖုတ်လှိုက် ဖုတ်လှိုက် အချိန်ကျ မှဆေးရုံ ရောက် လာ ပါ လေ ရောဗျာ။ သူတို့ နေတာ ဆေးရုံနဲ့ဝေးလို့တော့ မဟုတ်ဘူးဗျ အိမ်က လမ်းလျှောက် သွားရင် တောင် ဆေးရုံနဲ့ဆို ၅ မိနစ်မကြာပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗျာ သိတဲ့အတိုင်း ဘယ်သူမှ ဒီဆေးရုံတွေ ကိုသွားချင်တာမဟုတ်ဘူးလေ သဟောက် သဟမ်း ကလည်းနိုင်ပါ့၊ ပြီးတော့ ဟိုစစ်ဒီစစ်နဲ့ ပိုက်ဆံကုန်တာကတော့ သောက်သောက်လဲဘဲလေ ဘယ်သူအား ကိုးမလဲ ဒီဆေးရုံတွေကို။ ကလေးက ၉ နှစ် ၁၀ နှစ်ပေါ့ နှပ်ချေးတွဲလောင်း ဆံပင်နီကြောင် ချေးလက်လေးသစ် နဲ့ပါ … ဆေးရုံလဲရောက်ရော (ငွေမက် တဲ့ အကြင်နာ တရား မရှိတဲ့ လူသားချင်းမစာနာတတ်တဲ့ အင်းပြောရရင် ခေတ်သစ်ဓါးပြတွေ ပေါ့) … … “အဲဒီလူတွေဗျာ ဝိုင်းပြီး အပ်တွေနဲ့ထိုးကြ သွေးတွေဖေါက်ကြ မညှာမတာဗျာ ကလေးကို လုပ်ကြတာ ဒီကြား ထဲ မဆီမဆိုင်ဗျာ ကလေးဗိုက်ကို ပေကြိုးနဲ့ ကဒီးကဒီး လာလာပြီး တိုင်း သေးတယ် ကျုပ်တို့က အထပ် လိုက်၊ အထပ်လိုက် ဒင်းတို့ကိုမပေးနိုင်ဘူးမို့လား ဆေးကြတော့ ဘာမှမယ်မယ်ရရ မပေးဘူး ” ကျုပ်ကို ကို(…) ဆိုတာ ကလေးရဲ့အဖေပေါ့လာရင်ဖွင့်လို့သိရတာ။ အင်း အဲဒီကလေးမလေး ရောက်လာတာကလည်း ထမင်းစားချိန်ကြီး၊ အဲဒီမှာ ကျုပ်နဲ့လည်း မျက်မှန်းတန်းမိနေတဲ့ အလုပ်သင် ဆရာဝန်မလေး ဂျူတီကုတ်အဖြူရောင်လေးနဲ့ ဆိုတော့ နာမည်ကိုတော့ ဖြူဖြူ ဘဲထားလိုက်ပါတော့။ အဲဒီဆရာဝန်မလေးက ကလေးဆောင်က သူ့သူငယ်ချင်း ဟောက်စ်လေးဆီကို ထမင်းစားဖို့လာရင်း ခုနင်ကလူနာနဲ့တွေပါလေရော ဆရာဝန်တွေမို့လား ထမင်းစားချိန်ဆိုတာ မရှိဘူး အိပ်ချိန်လည်းရှိကြတာမဟုတ်ပါဘူး၊ လူနာရှိရင်ကြည့်ကြတာဘဲလေ၊ လူမဆန် ကြဘူး ခေါ်ရမှာပေါ့။ ပြောရရင် ဒီဟောက်စ် ဆိုတာတွေက ဘွဲ့တော့ရပြီးသားဗျ။ ဘွဲ့မှ M.B.,B.S ဆိုတာလေ မြန်မာဘရမ်းဘတာ ဘာညာဆိုတဲ့ ဟာပေါ့ ဘရမ်းဘတာ ပဲပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာပဲပဲဖြစ်ဖြစ် ၇ နှစ်နှစ်သင်ရတဲ့ ဘက်ချလာ နှစ်လုံးပြူးလေးလေ၊ ဒင်းတို့ နေ့နေ့ညည အစားပျက် အသောက်ပျက် ချီးသေး အပေခံ ပြီး အေအိုင်ဒီအစ်တော တီဘီတော မှာ လုပ်တဲ့ အတွက် နိုင်ငံတော်က တလကို ၁၂၅၀ ကျပ် ထောက်ပံ့ရှာပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ စာလုံးပေါင်းမှား တာ အဖတ်မှားတာ မဟုတ်ပါဘူး ဘက်ချလာ နှစ်လုံးပြူးလေးတွေ ကို နေ့နေ့ညည ခိုင်းမှ တ လမှ ၁၂၅၀ ထည်းနော် အရမ်းတန်တယ်၊၊ ပြောလက်စနဲ့ လက်ထောက်ဆရာဝန် ဆိုတာတွေ ကိုလည်း ဟဲဟဲ ဟဲဟဲ တလလုံးလုံး နေ့နေ့ညည အခါကြီးရက်ကြီး မကျန် အေအိုင်ဒီအစ်တော တီဘီတောမှာ အပီခိုင်း မှ နိုင်ငံတော်က ၇၅၀၀၀၊ ၈၀ ၀၀၀ ကျပ် ပေးရတာပါ၊ ငွေမျက်နှာပဲကြည့်ကြတဲ့ ဆရာဝန်တွေလေ ဟဲဟဲ ဟဲဟဲ ဒီအရုတ်တမာ ဆရာဝန်တွေ
အကြောင်းပြော ရတာ အကု သိုလ်များပါတယ် စောစောကပြောနေတာပြန်ဆက်ရရင် အဲဒီဖြူဖြူလေး ပေါ့ အားလုံးရှုပ် နေ တော့ သွေးကူဖေါက် အကြောကူရှာ ပလာစတာကူကပ် လုပ်ရော၊ ဒါပေမယ့် ဟိုလုပ်ဒီလုပ်နဲ့ ထမင်းစားဖို့ရတဲ့ အချိန်ကျော်လာတော့ သူ့ဝဒ်သူ ပြန်တာပေါ့။ ဒီအချိန်မှာ ကျုပ်တို့ရဲ့ ကလေးအဖေ ကို(…) က ဖြူဖြူ့ကိုမျက်စိကျနေပြီ၊ တမျိုးမထင်ပါ နဲ့ ကဒီးကဒီးလာစမ်း ဝိုင်းကုနေကြတဲ့ ဆရာဝန် ကြီးလတ်သေး တွေကို မျက်လုံးထဲ မထားတော့ ဘဲ စောစောက ဆရာဝန်မ ကဘာလို့ ဆက်မ ကုပေးတော့တာလဲ ဘယ်ရောက် သွားလည်း ဒီအတိုင်းထားခဲ့ပြီ ဘာညာပေါ့ ပြောရရင် ကို(…) တင်းပြီ၊ သူ့ဂျူတီမဟုတ်တာ သူ့ဝဒ် မဟုတ်တာ လာမပြောနဲ့ ကို(…) ဘိုလို မတတ်ဘူး။ Patient is customer and customer is always right! I repeat righttttt.
ဒါဘဲ ကို(..) သိတယ်။ ငွေမက် တဲ့ အကြင်နာ တရား မရှိတဲ့ လူသားချင်းမစာနာတတ်တဲ့ ခေတ် သစ် ဓါးပြပဲ သိတ်ရွံစရာကောင်းတဲ့ ဆရာဝန်တွေဘဲ ဘာမှလာရှင်းပြမနေနဲ့။ ရင်ဘတ်ကြီး နဲ့ ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ခင်ဗျားတို့ သားသမီး ဆိုဘယ်လို နေမလဲပေါ့။ ဘလာဘလာ ပေါ့။ ကို(..) ခံစားနေရပြီ။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီ ညနေမှာပဲ ကလေးကဆုံးသွားပါလေရော ကလေးအဖေ ကို(…) ပေါက်ကွဲပြီပေါ့။ အချိန်နှောင်းမှရောက် တာတွေ ဘာတွေ ကို(…) မသိဘူး ကျွန်တော့ကလေးက ခေါ်လာတုန်းကအကောင်း ဒီက ဆရာဝန်တွေ အပ်တွေနဲ့ ဝိုင်းလဲဆွပြီးရော ကျွန်တော့ကလေးတော့ သေရှာပါလေ ရော ယုတ် မာလိုက်ကြ လူစိတ် မရှိလိုက်ကြတဲ့ ဆရာဝန်တွေ။ ကို(…) အတင်းဆုံးကတော့ ဖြူဖြူကိုဘဲ၊ သူ ကပြစ်ထားခဲ့တာ မဟုတ်လား။ ကို(..) ကစနေသား ကျေက်ဆည်ဇာတိ နေတက်ရေတက်မှာမွေးတာ မြန်မာပြီပြီ သတ္တိပြတော့တာပေါ့ တရားစွဲတာ တိုင်တာ တောတာတွေ ကို ကို(…) မသိဘူး ညနေဖြူဖြူ ဆေးရုံကပြန်ချိန်မှာ ယောင်္ကျားကွပေါ့၊ နောက်ကနေ ချောင်းပြီး တုတ်နဲ့ ပြေးကျွေးတာ ကျုပ်တို့တွေကလည်း အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ ဒေါက်ဒေါက်တွေ ဒီလောက်ဆိုးမှန်းမသိတော့ ဝိုင်းဆွဲရတာပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေး တယောက် ကို နောက်ကနေ ချောင်းပြီး တုတ်နဲ့ ရိုက်ဖို့ကြိုးစား ဝံ့တဲ့ ကို(…) ရဲ့သတ္တိကိုတော့ ကျုပ်ကကြိုက်တယ်။ အဖေလေ ခံစားရမှာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား လူ့အသက်တစ်ချောင်းလေ။
ကွန်မင့်တွေထဲမှာ ပြောထားတာတခုကို ကျုပ်တော့ ထောက်ခံတယ် ဘာကေ့စ်လာလာ ဇီဇီတို့ ကေကေတို့ အက်စ်အက်စ် တို့မှာ လို ABC စစ်ပါလား def စစ်ပါလား GH စစ်ပါလား IJ စစ်ပါလား KLM စစ်ပါလား OPQ စစ်ပါလား rst ရိုက်ပါလား xyz ရိုက်ပါလား !@#$ ရိုက်ပါလား ……… သူ့ဟာသူ လူနာ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တာ မတတ်နိုင်တာ တွေဘာတွေ လာရှင်းပြမနေ ပါနဲ့ ဘလော့ကနေ အားအားယားယား ပွားတာပွားချင်တာပွားမှာ ပေါ့ ငွေဆိုတာ အကြင်နာ တရား မရှိတဲ့ လူသားချင်းမစာနာတတ်တဲ့ အင်းပြောရရင် ခေတ်သစ်ဓါးပြတွေ ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်ဒေါက် တွေ ပူရမယ့်ဟာ။ လူနာမတတ်နိုင်ရင် စိုက်ပေးလိုက်ပေါ့။
အဲဒီလိုပါဘဲ ကွန်မင့်တွေထဲက နောက်တနေရာမှာ ပြောထားတာကို ကျုပ်တော့ တကယ်ဟတ်ထိတယ်၊ လေဖြစ် တာကို လေဆေးမပေးဘဲ မှန်ပြောင်းနဲ့ ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ ဆရာဝန်လေ သိတယ်မဟုတ်လား ငွေမက်ကြတာလေ ဆေးကုမယ့်ဟာကိုမကုနိုင်ဘူး ဟိုစစ်ဒီစစ်နဲ့ ဖောက်လိုက်ရတဲ့ သွေး၊ ရိုက် လိုက်ရတဲ့ ဓါတ်မှန် ပြီးကိုမပြီးနိုင်ဘူး။ ကွမ်းယာဆိုင်လောက်တောင် မမိုက်ဘူး။ ကွမ်းယာဆိုင် ဆိုလို့ ပြောရဦးမယ် ကွမ်းယာဆိုင်တို့ ရမ်းကုတို့ သမ လိုက်လို့ သေသွားရင်
ကျုပ်တို့ ကစိတ်မဆိုးဘူး အစကတည်းက ရမ်းကု ပါဆိုမှ။ ပြီးတော့ လူဆိုတာသေမျိုးလေ သတ္တဝါ တခု ကံတခု မဟုတ်လား။ ဒေါက်ဒေါက်တွေ လက်ထည်း ကနေ တိမ်းပါးသွား ရင်တော့ ဟင်းဟင်း ဟင်းဟင်း ဆရာဝန်တွေဝိုင်းသတ်လိုက်ကြတာ၊ ရက်စက်လိုက်ကြတာ အင်းဒီလိုဘဲပြောရမှာပေါ့။ ကွမ်းယာဆိုင်တို့ ရမ်းကုတို့ ဆီမှာအကြွေးတော့မရဘူး မှန်တယ်လေ သူတို့က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် မဟုတ်လား အကြွေးပေးစရာလား။ ကြွေးဟောင်း မဆပ်နိုင်သေးလို့ကတော့ ကြွေးသစ်ထပ်ယူဖို့ဆိုတာ … အဓိပ္ပါယ် မရှိတာတွေ မပြောတာကောင်းပါတယ်။ (ရပ်ကွက်ထဲက)ဆေးခန်း ကအကြွေးမပေးလို့ကတော့ ဟင်း။ ကြွေးဟောင်း မပေးသေးလဲ ထပ်လာရင်ထပ်ကုပေး ရမှာဘဲလေ လူ့အသက်လေ လူ့အသက်ဗျ။ ဒီလိုနဲ့ ကြွေကျလို့ ပိတ်ပြေးရတဲ့ ဆေးခန်းလေးတွေ … အဲဒီဆေးခန်းလေးတွေ ဘယ်နှစ်ခန်းရှိရှိဗျာ ငွေမက်လှတဲ့ ဒေါက်ဒေါက်တွေခံရတာ၊ ကောင်းတယ်။ …. အင်းအဲ ဟဲဟဲ နောက်တနေရာကျတော့ ပါလိုက်သေးတယ် ‘အုပဓေ’ သဘောအရ ၁၈ နှစ်ကျော်မှ လူကြီးဖြစ်မှာမို့ ၁၅ နှစ်ကို ခလေးဝဒ်မှာ ထားရမယ် ‘လို့ဇ်’ ဟဲဟဲ အုပဓေ ကြောင်းအရ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ၂၁ မှ မဲပေးခွင့် ရှိလို့ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ အသက် ၄၀ ကျော်မှ အရွေးချယ်ခံနိုင်လို့ အင်း… အသက် ၂၁ အောက်ကို ချိုင်းဝဒ် မှာထား ရမယ် အသက် ၄၀ အောက်ကို ချိုင်းဝဒ် မှာထား ရမယ် ဟဲဟဲ ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင်ဗျာ အသက် ၉၀ အောက်ကို ခလေးဝဒ် မှာ ထား ရမယ် ဒါဘဲ ဟိုဟာကြက်။
ကျုပ်တို့အမြင်ပြောရရင် ဆရာဝန်တွေဟာ လခ မယူသင့်ဘူး အခုလည်း ၇၅၀၀၀၊ ၈၀၀၀၀ ရနေတာ ကိုနည်းတယ်ထင်နေကြတာ မဟုတ်လား နည်းရင် မယူကြနဲ့ပေါ့။ လူနာကပိုက်ဆံ မရှိရင် စိုက်ပေးရမယ် မဟုတ်လို့ကတော့ သိပ်ရွံစရာကောင်းတဲ့ လူယုတ်မာတွေဘဲ။ တခြား ပညာရှင်တွေနဲ့ မယှဉ်နဲ့လေ ဘယ်ပညာရှင်ကိုမှ အလကားခိုင်းလို့ မရတာ ကျုပ်သိတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခုပြောနေတာ ဆရာဝန်တွေအကြောင်း၊ လူ့အသက်ကိုရင်းနေရတာ။ လူ့အသက်လေ လူ့အသက်။ လူ့အသက် ဆိုလို့ ပြောရ ဦးမယ် ကျုပ်သိပါတယ် ကျုပ်အပါအဝင် အခု ဟိုလိုလုပ်ပါလား ဒီလိုလုပ်ပါလား လု့အသက် လု့ အသက် (ဝါ့အသက်မဟုတ်ဘူး) လို့ ကျင်ကြီးထွက်အောင်အော် နေကြတဲ့လူတွေထဲမှာ အမေအရင်း အဖေအရင်း နေမကောင်းတာတောင် ညဘက်ထပြီးပြုစုဘူးတဲ့ သူဘယ်နှယောက်မှမရှိဘူးဆိုတာ ကျုပ် သိပါတယ် လူ့အသက်ပဲဖြစ် မဖြစ်ဖြစ် တစိမ်းတယောက် အတွက် ညစ်ပတ် နံစော် တာတွေ ကို နေ့နေ့ ညည အချိန်မရှိ အချိန်ရှိ အစားပျက် အသောက်ပျက် အအိပ်ပျက် ခံပြီး လုပ်ကိုင်ပေးဘို့ ဟဲဟဲ ရူးနေလား ဒါတွေက ကျုပ်တို့နဲ့ မဆိုင်ဘူးလေ ဟို လူစိတ်မရှိတဲ့ အကြင်နာတရား မရှိတဲ့ ဖိုးငွေမက် ဒေါက်ဒေါက် တွေ လုပ်ရမှာလေ။ ကျုပ်တို့အလုပ် က ပါးစပ်ဖျားလေး နဲ့ အဲအဲ ရင်ဘတ်ကြီး နဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ် ကနေဖောဘို့ ပဲလေ၊ လေလေ၊ လေ ဝေလေလေ။
ဆေးရုံကို အရေးပေါ်လူနာတစ်ယောက် ရောက်လာပြီဆိုပါတော့ အရင်ဆုံး စကြစ်တာက အပေါက်စောင့်။ ပိုက်ပိုက် မကမ်းလို့ကတော့ ရစ်ပြီ။ ဟုတ်တယ်လေ ဆေးရုံဗျဆေးရုံ၊ ဇရပ်မဟုတ်ဘူး၊ ကဒီးကဒီး ဝင်ချင် တိုင်းဝင်၊ ထွက်ချင်တိုင်းထွက်လို့ ရမလား။
ရေကမ်းထားရင်တော့ တမျိုးလုံးတဆွေလုံး တရပ်ကွက်လုံး လိုက်လာလဲ အင်းအဲ လူမှုရေးကရှိသေးတယ်လေ၊ လူ့အသက် မဟုတ်လား၊ ပေးဝင်ရမှာပေါ့။ လှည်းတွန်း တဲ့ လှည်းဆရာကလည်း အင်းအဲ နည်းနည်းပါးပါးတော့ သိတတ်ရမယ်လေ။ ရော်ရကေ မပါရင်တော့ နဲနဲ ပါးပါးဆောင့် ချရင်လည်းချမှာပေါ့ဗျာ။ လှည်းကို တစ်ယောက်တည်း တွန်းလို့နိုင်မလား လူနာပိန်ပိန်လေးပါတို့ဘာတို့ လာမပြောနဲ့။ နှစ်ယောက်တော့တွန်းမှာပေါ့ သိတတ်ရမယ်လေ နှစ်ယောက်စာတော့ပေးရမှာဘဲ။ ဒါတွေက နားလည်ပေးလို့ ရပါတယ်။ ကျုပ်တို့တင်းတာက ဒေါက် ဒေါက်တွေဘဲ။ သူတို့ အလုပ်သမားတွေကို ကျုပ်တို့ စိတ်မဆိုးရေးချ မဆိုး၊ ကျုပ်တို့ မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ ကျေးဇူးကို ရှာကြံတင်တတ် တဲ့လူမျိုးဗျ။ ဆရာဝန်တွေ ပေါ်မှာ သာဘာကျေးဇူး မှမတင်တာ။
အင်း အခုမှ စပါပြီ ဂျုတီကုတ်ကောင်တွေ၊ လူနာမှာ ပိုက်ဆံရှိတာမရှိတာ နားမလည်ဘူး ဟိုဆေးလိုရတာနဲ့ ဒီဆေးလိုရတာနဲ့ ဟိုဟာစစ်ရမှာနဲ့ ဒီဟာရိုက်ရမှာနဲ့။ ကြိုက်ကိုမကြိုက်ဘူးဗျာ။ တချို့ ရှိပါတယ် ဆရာဝန်တွေ စုပြီး ဆေးဝယ်ပေးတာတို့၊ အိပ်စိုက်ပြီး CT MRI ရိုက်ပေးတာတို့ ဆိုတာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေက အမြဲမဟုတ်ပါဘူး တခါတလေမှပါ။ ဆရာဝန်တွေဟာငွေကိုမက်ပါတယ်။ ကဲပါဗျာ ဝဒ်ထဲ ရောက်ပြီဆိုပါတော့ နပ်စ်မကတော့ နည်းနည်းတော့ ဆူတတ်ပူတတ်တယ်၊ ဟောက်တတ်ဟမ်းတတ် တယ်။ ဟဲဟဲ လူဘဲဗျာ ပင်ပန်းတော့လည်း နည်းနည်းတော့ စိတ်တိုတာ စိတ်ဆိုးတာရှိမှာပေါ့၊ အများနဲ့ ဆက်ဆံနေရတာ မဟုတ်လား။ ကျုပ်တို့က ဒေါက်ဒေါက်တွေသာတင်းတာ ပါ။ နပ်စ်မက စိတ်ဆိုးတတ်ပေမယ့် နည်းနည်းပါးပါး ပေးထားရင်တော့ ခုတင်နေရာက အစ စီစဉ်ပေးရှာပါတယ်။ ပက်လက်ကုလားထိုင်တို့ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်တို့ တောင်ငှါးလို့ ရသေး ဟေးဟေးဟေး။ ဆေးရုံမှာ ဆရာဝန်ကဟောက်တယ် ဆူတယ်ဆိုတာ အင်မတန်ရှားမှန်း ကျုပ်တို့သိပါတယ်။ သေချာတာ က ဟောက်စ်တွေ၊ အေအက်စ် တွေက ဟောက်တယ် ဆူတယ် မရှိသလောက်ပါ။ သူတို့က သူများ သွားဟောက်ဖို့ နေနေသာသာ သူများကဟောက်တာခံနေကြရတာ မဟုတ်လား။ လူနာလာမေးလို့ စိတ်တိုတယ် ဆိုတာ ဒီလူတွေကြားထည်းမှာ မရှိပါဘူး စိတ်တိုဖို့ နေနေသာသာဗျာ ကဒီးကဒီး ဟိုဟာ လာရှင်းပြ ဒီဟာလာရှင်းပြကလုပ်တတ်သေးတယ်။ အဲဒါကိုကျုပ်တို့က စိတ်တိုတာ။ ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဗျာ လာရှင်းပြတဲ့ ဆရာဝန်ကိုလည်း လျှာရှည်လို့ မကြိုက်ဘူး စကားနည်းတဲ့ ဆရာဝန်ကိုလည်း မတူသလို မတန်သလို ဆက်ဆံလို့ မကြိုက်ဘူး၊ ဆရာဝန်တွေကို ကြိုက်ကို မကြိုက်ဘူး။ ကျုပ်တို့ ကတော့ပြတ် ပြတ်ပဲ။ ဆရာဝန်တွေကိုတင်းတယ် ဒါပဲ။ တခါတလေ ရှိပါသေးတယ် သူနာပြုက ကြားကနေ ဆရာဝန် ဖို့ ဘာပေးရမယ်၊ ညာကျွေးရမယ် ဆိုပြီးကွမ်းတာတွေ။ ကျုပ်သိပါတယ် ဆေးရုံမှာ ဆရာဝန်က ငွေမရလို့ ဘာမလုပ်ပေးဘူး ညာမလုပ်ပေးဘူး ဆိုတာ တော်တော်ကြီးကို ရှားတဲ့ အဖြစ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဗျာလူနာက ဒါတွေဘယ် သိနိုင်ပါ့မလဲ။ ဆရာဝန်ကတောင်းလို့ ဆိုပြီး သူနာပြုကကြားကဝိုက်သွား လည်း ဒါ ဆရာဝန် မှာတာဝန်ရှိတာဘဲ။ သူတို့ဟာသူတို့ အစကတည်းက အဲဒီလို မဖြစ်အောင် လုပ်ထားကြပေါ့။ ဆရာဝန်တွေ မတောင်း တချားဝန်ထမ်းတွေ တောင်းနေကြတယ်ဆိုလည်း ကျုပ်ကတော့ ဒီ ဂျူတီကုတ်ကောင်တွေ ကိုဘဲမုန်းတယ်။ အီမိုရှင်နယ်ဖြစ်တာတော့
မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ ခံစားရတာကိုပြောတာပါ။ တလ ၈၀၀၀၀ ထားပါတော့ ဒေါ်လာ ၈၀၊ အချိန်ပြည့် အချိန်ပို (ရူးနေလား မက်လှချေလား မြန်မာနိုင်ငံ မှာ အချိန်ပို ကြေး ရှိမလား) ဘာအပိုခံစားခွင့်မှ မပါဘဲ လုပ်နေကြတယ် ဆိုပေမည့် ကျုပ်ကတော့ ဆရာဝန်ဆို ဘယ်ဆရာ ဝန်မှမကြိုက်ဘူး။ ဟိုး ပရော်ဖက်ဆာကြီး ကနေ ကျောင်းပြီးစ ဒေါက်ဒေါက် အပေါက်ကလေးတွေ အထိပေါ့
အမှန်တော့ ဆေးကျောင်းသားတွေ ကိုလည်းကျုပ် ကတော့ တင်းတာဘဲ။ သင်းတို့လည်း ဒမြလောင်းလေး တွေဘဲ။ အမှန်တော့ ၉ တန်း ၁၀ တန်း စာတော်တဲ့ ကောင်တွေလည်း ကျုပ်ကတော့ မြင်ပြင်းကိုကပ်တယ်။ သင်းတို့လည်း ဒမြလောင်းလေး တွေဘဲ။ ကျုပ်တို့ တဖုံးဖုံးကျ တဲ့စာမေးပွဲကို သင်းတို့ကဖြေလိုက်ကြတာ နည်းတဲ့အမှတ်တွေလား သင်းတို့ရကြတာ မကြိုက်ပါဘူးကျုပ်က။ ဒေါက်ဒေါက်တွေပြီးရင် အင်အင်တွေ အိုဗျာ ကျုပ်ထက်သာတဲ့ လူဖြစ်လို့ကတော့ အပြစ်ကိုမရ မက ရှာပြီးကို တင်မှာပဲ။
မခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည် သေဆုံးခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ထုတ်ပြန်
ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ SSC အထူးကုဆေးခန်းတွင် သေဆုံးခဲ့သည့် အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် မခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည် သေဆုံးခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဒီဇင်ဘာလ ၂ရက် နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီက မခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည် သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ခွဲစိတ်ကုသခဲ့သော ဆရာဝန်ကြီးသည် လုပ်မှား၊ ကိုင်မှား၊ ဆုံးဖြတ်ချက်မှားခြင်း (Clinical Mistakes)၊ လူနာလုံခြုံမှု အတွက် မခွဲစိတ်ခင်နှင့် ခွဲစိတ်ပြီး လုံလောက်သော ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းခြင်း (Pre-operative and Postoperative Assessment)၊ တာဝန်ယူမှု နှင့် တာဝန်ခံမှု အားနည်းခြင်း (Responsibility and Accountability) တို့ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ သို့ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီမှ အဆိုပါ ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်ကြီးအား ဆေးကုသ ခွင့်လိုင်စင် ၅ နှစ်ရပ်စဲရန် (De-licensing) ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၄င်းဖြစ်စဉ်တွင် ပူးတွဲတာဝန် ရှိခဲ့သော မေ့ဆေးဆရာဝန်၊ ပထမ လက်ထောက် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နှင့် သမားတော်ကြီးတို့အား ပြင်းထန်စွာ သတိပေးရန်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
ထို့ပြင် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အထူးကုဆေးခန်းကြီးတွင်လည်း လူနာအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးရာတွင် ထိရောက်မှုနှင့် လုံခြုံမှုရှိသောစနစ်နှင့် လုပ်ကိုင်ချက် အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ သို့ပါ၍ အဆိုပါ အထူးကုဆေးခန်းအား နောက်နောင်အလားတူကိစ္စများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ပြင်းထန်စွာ သတိပေးရန်နှင့် လူနာရှင်အား တောင်းပန်စေရန်၊ လုံခြုံစိတ်ချရ၍ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ် (Safe and competent health care system) ကို စီစဉ်ဆောင်ရွက် ထားရေး အတွက် သတိပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံဆေး ကောင်စီက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
''ဆရာ့အနေနဲ့ကတော့ ဒီသတင်းတွေ စပါကတည်းက အရေးကြီးတဲ့ သတင်းမှန်းသိတယ်။ ဒါကြောင့် စာ နယ်ဇင်းရှုထောင့်ကရော တရားဥပဒေ ရှုထောင့်ကပါ ကြည့်ခဲ့တဲ့အခါမှာ နှစ်ခုစလုံးနဲ့ လွတ်ကင်းခဲ့တယ်။လွတ်လွတ်ကင်းကင်း ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီအတွက် ဆေးကောင်စီက အလျင်အမြန် ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ မီဒီယာ တွေ တာဝန်ကျေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တချို့၊ ဆေးခန်းတချို့နဲ့ ပတ်သက်သူ တချို့ကတော့ ကျီးကန်းတွေလို ၀ိုင်းအာမှာပဲ။ သူတို့အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်တဲ့အတွက် ၀ိုင်းအာမှာပဲ။ အဲဒီအတွက်လည်း ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူး။ ပူစရာမလိုဘူး။ ပြည်သူလူထု က ဆရာတို့ဘက်က ထောက်ခံရင် ပြီးတာပါပဲ။ ဆရာကတော့ မီဒီယာ တွေရဲ့ ဒီလုပ်ရပ်ကို အင်မတန်ကျေနပ်တယ်''ဟု ဆရာလူထုစိန်ဝင်းက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဖြစ် ပြီးတာတွေက တော့ ပြီးပြီပေါ့ဗျာ.ဟုတ်ပါတယ် ခွဲလိုက်တယ် သေသွားတယ် ဆရာဝန်ကြီးအပြစ်ပဲပေါ့. အေး... သူ့ က်ုအရေးယူ မယ်။ အားလုံးလဲသိပြီးကြပါပြီ၊ Appendicitis နဲ့ဆရာကြီးက diagnose လုပ်တယ် ။ တူတဲ့ ဟာလည်း တူ ပါ တယ် ။ pain , fever and vomiting .. စာတွေမှာလည်းရေးကြပါတယ်ဗျာ. surgical textတွေမှာလည်း ultrasound ရောဂါသိ ချင်မှသိမှာ..CT scan ဝေးရော။ appendicitis ကို CTရိုက် ရ ပါ့မလားဆို ပြီး အပြစ်ပြော ချော်တော ငေါ့တာ ကိုခံရဦးမယ် ။ မလွယ်ပါလား အရပ်ကတို့ေ ရ.။ဆရာကြီးက emergency ထင်လို့ပဲပေါ့။ အချိန်ကြာပြီး အူအတက်ပေါက်ထွက်တဲ့အဆင့် သွေးဆိပ်တက်ချိန်မှာ သွေးပေါင်ချိန်လည်းပဲ ကျနိုင်တာပဲလေ။ တစ်ဖက်သတ်ဆန်တယ်လို့ပြောကြမှာတော့ သေချာပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် လည်းကောင်မလေးကတော့အသက်ပေးသွားရတယ်။သူ့ မိသားစုကိုလည်းကိုယ်ချင်းစာပါတယ်ဗျာ။ဒါပေသိ သွေးစစ်တာ တွေ ဟိုဟာရိုက်ဒီဟာရိုက်ဖို့ ပျက်ကွက်တာတွေကိုစောင်းပေးပြီးပြောနေကြတော့ ဆေးကျောင်း မှာဆေးရုံမှာလူနာနဲ့ ပဲမေးရ စမ်းရပြီးတော့ေ၇ာဂါရှာကုသပေးသွားကြတဲ့ရှေးဆရာကြီးတွေကိုတော့ မျက်နှာပြ၇မှာကိုမ၀ံ့မရဲပါပဲ။သူတို့ စာသင်တော့လည်းဒီလိုပဲသင်ရတယ်. ဟဲ့နားကြပ်နဲ့ ထောက်ကြပါဟဲ့ စမ်းကြပါဟဲ့ ခေါက်ကြည့်ကြပါဟဲ့နဲ့ တဖွဖွပြောနေကြနဲ့ ဆရာကြီး ဆရာမကြီးတို့ မျက်နှာကိုတောင်ပြန်မြင်ယောင်တယ်ဗျာ။မြန်မာပြည်မှာဘာစက်မှမရှိခင်ကတည်းက ဒီလိုပဲကုလာ စမ်းလာ လေ့လာလိုက်ကြတာ။အစဉ်အဆက်ပါပဲ။ နောက်မှသာစက်တွေပေါ်လာကြလို့ လူနာတွေကလည်းသိလာကြသမို့ အထူးကုဆေးခန်းတွေရောက်ပြီဆိုရင် ဟိုဟာလေးစစ်ပါဦးလား ။ ဒီဟာလေးတော့ရိုက်လိုက်ပါဦးလားဆိုပြီးပြောကြတာတွေလည်းခဏ ခဏပါဘဲ.အခုလိုလက်နဲ့ စမ်းပြီးခွဲတော့သေပြီဆိုပြီးအလိုမကျမှုတွေ ဆရာကြီးကပြစ်ထားတယ် သြော်...ပြောရဦးမယ် media ကရောအမှန်ပဲ ရိုးသားရဲ့ လား၊ ဆရာဝန်တွေသာသိတဲ့ rebound tenderness လူနာရဲ့ ဗိုက်ကို လက်နဲ့ လွှတ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာပိုနာ၏ မနာ၏ ဆိုတာကို media လျှပ်တပြက်က အသေးစိတ် လူနာကပဲပြောနေသယောင် ရေးထားကိုလည်းသံသယ ဖြစ်မိပါတယ်။ မှားတယ်လို့ ပြောလို့ ရပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာငွေမက်တာ မတရားတာ ဆရာဝန်လူတန်းစားတစ် ရပ်ထဲပဲလား တရားစီရင်ရေး အုပ်ချုပ်ရေး ရပ်ကွက် လူကြီး တံတားဆောက် လမ်းဖောက်နေတဲ့အကောက်ကြီး အကောင်ငယ်တွေရောမပါဘူးတဲ့လား.....ဝေဖန် ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့ လားခင်ဗျာ ။
do not just defend pray for the soul of the little girl too. ok.
Dear Phame, I amaBuddhism so I do not pray and I am not defending any specific person in this blog.
ဆရာဝန်တွေဆိုတာလည်း ကြိုးတန်းပေါ်လမ်းလျှောက်နေရတာပါ။ ဆရာဝန်တွေကုပေးလို့ သေမတတ်ဖြစ်နေတဲ့လူနာ ပြန်ကောင်းသွားတာတွေကိုတော့ မပြောကြဘဲ အခုဒါလေးဖြစ်သွားတော့ ပြောလိုက်ကြတာများ ရစရာမရှိအောင်ပဲ။ လူ့အသက်ဆိုတာတန်ဖိုး ရှိပါတယ်။ ပိုတော်တဲ့လူတွေဆိုရင် နိုင်ငံတော်အတွက် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆရာဝန်ကြီးကို ဘယ်လိုအပြစ်မျိုးပေးသင့်လဲ။ သေဒဏ်ပေးရမှာလား။ စဉ်းစားကြပါအုံး။ William Thargi ဆိုရင်ပြောတာများ ပက်ပက်စက်စက်ပဲ။ သူကဆေးပညာအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့ နေမှာပါ။ ဒီလိုလူမျိုးတွေကြောင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမတိုးတက်တာပါ။ ဒီလိုဘာမှန်းမသိ house ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုပြောချင်တိုင်းပြောနေရင် ခင်ဗျားသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ ဒါဆိုလည်းခင်ဗျားသေခါနီး ရောဂါဖြစ်နေရင် ဆရာဝန်တွေဆီမသွားနဲ့လေ။ ဟုတ်ပြီးလား။ လူဆိုတာသေတစ်နေ့မွေးတစ်နေ့ပဲဗျာ။ ခင်ဗျားသေတော့မယ်ဆိုလည်းဆရာဝန်မခေါ်နဲ့သိလား။ ဆိုက်ကားသမားခေါ်ပြီးကု။ ခင်ဗျားလိုနားမလည်တဲ့လူတွေအပေါ်ပြောရတာ အချိန်ကုန်ပါတယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားပုံစံကြည့်ရတာလည်း ဆိုက်ကားသမားအင်တာနက်ဝင်သုံးရင်း Comment ပေးသွားတာနေမှာ။ အင်း...
၀ီလျှံသာဂိ ဆိုတာ ဆရာဝန်တစ်ဦးဆိုတာ မရိပ်မိတာလား.. တမင်တကာ မသိဟန် ဆောင်နေတာလား.. သူရေးတာတွေက ဆရာဝန် တွေကို နှိပ်သလိုလိုနဲ့ ဆရာဝန်တွေဘက်က ပြောပေးနေတာ ဆိုတာ သေချာလဲ ပြန်ဖတ်ပါဦး ဆရာရယ်... မနေနိုင်လို့ ၀င်ပြောမိတာပါ.. တစ်ခြားတော့ ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါဘူး.. ဆေးပညာအကြောင်းလဲ ကျွန်မတို့က ဘာမှ နားမလည်တော့ မသိသလိုဘဲ နေပါတော့မယ်.. ဒါပေမဲ့ ဘယ်အရာမဆို ဘက်၂ဘက်ကနေ ကြည့်တတ်ဖို့တော့ ကြိုးစားလိုက်ပါဦးမယ်..
ဒီမှာ ၀င်ဖတ်ကြည့် လို့ရပါတယ်.. အဖြူ နဲ့အနက် တဲ့ ကြည့်တဲ့ဘက်က မတူတာနဲ့ အမြင်ချင်းလဲ မတူတော့ပါဘူးတဲ့.. ၂ဘက်လုံး ဘက်ကနေ ကြည့်နိုင်ရင်တော့ အဖြေတစ်ခုတော့ တွေ့ကောင်းပါရဲ့
အပေါ်မှာရေးထားတဲ့ ၀ီလျှံသာဂိဆိုတဲ့ document ကိုသေချာပြန်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါဦး။ ခင်ဗျားရေးထားသလို ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ သေချာပြန်ဖတ်ကြည့်ပါအုံး။ ကျွန်တော်ကတော့သူဟာ ဆရာဝန်တစ်ဦးဆိုတာထက် ဆယ်တန်းတောင်မအောင်သေးတဲ့ ဗဟုသုတနည်း မနာလိုဝန်တိုစိတ်များသည့် လူငယ်တစ်ဦးသာသာ သူတစ်ဦးဖြစ်မှာပါ။ မာလိကာမိဖုးရားကြီးက ကောသလမင်းကြီးအား စွပ်စွဲသလိုဖြစ်နေပါပြီ။ သူသာခင်ဗျားပြောသလို ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်မယ်ဆိုရင် သူဟာ Dr. တော့ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး။ ၀န်ဆရာလို့ခေါ်တဲ့ လောဘမောဟကိလေသာ ၀န်ပိနေတဲ့ အဆိုးမြင်ဝါဒီ ဆရာတစ်ဦးပဲနေမှာပေါ့။ (ဆရာဆိုတာနာမ်စားသုံးရတာပါဗျာ။ ယဉ်ကျေးမှုအနေနဲ့ ဆိုက်ကားသမားကိုတောင် ဆိုက်ကားဆရာခေါ်ရသေးတာပဲ) ကျွန်တော်တော့ လုံးဝကိုမထင်ပါဘူး။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ပါးစပ်ကဒီစကားတွေ ထွက်လာတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှကို မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ "ကျုပ်ထက်သာတဲ့ လူဖြစ်လို့ကတော့ အပြစ်ကိုမရ မက ရှာပြီးကို တင်မှာပဲ" ဆိုတဲ့သူရဲ့စကားက ဆရာဝန်တစ်ဦးအနေနဲ့ဘယ်လိုမှ မပြောသင့်တဲ့စကားပါ။
မ violet ရေ... သူ့ရဲ့စာကိုသေချာပြန်ဖတ်ဖို့ ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါရစေဗျာ။ ဆရာဝန်တစ်ဦးလို့ ရိပ်မိရအောင်လည်း Medical ethics (ဆေးပညာကျင့်ဝတ်) လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေစကားမပြောတာကိုး။ မသိဟန်ဆောင်ရအောင်လည်း ဆရာဝန်တစ်ဦးက သူ့ကိုယ်သူ ဓါးပြလို့ ပြောမတဲ့လား။ ဆယ်တန်းကိုတဖုံးဖုံးကျတယ်လို့ ပြောတဲ့သူက ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်မှာတဲ့လား။ ဒါကိုကျွန်တော့်ထက် မ Violet ကပိုပြီးတော့သိမှာပါ။
ဒီလိုဆိုလဲ ကျွန်မက စာဖတ်အားနည်းလို့ အယူအဆလွဲတယ် လို့ဘဲထားလိုက်ပါတော့.....ကိုရင်သာဂိရဲ့ comments တွေ အတော်များများ ကျွန်မဖတ်ဖုးပါတယ်. သူက တစ်ခြားခေါင်းစဉ်တွေအောက်မှာ ၀င်ရေးသေးတာကိုး...ကျွန်မကတော့ ကိုရင်သာဂိဟာ ဆရာဝန်တွေဘက်က ၀င်ပြောတယ်လို့ဘဲ ယုံကြည်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကိုရန်နိုင်လို ပညာရှိတစ်ယောက်က မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောလာမှတော့လဲ လက်ခံရမှာပေါ့ရှင်... အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုရင်သာဂိရေ...
ရှင်က ဘယ်ဘက်ကလဲ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်အောင် ပြောလိုက်ပါတော့လားရှင်.. ဒီကိစ္စ ကိုရင်လာရှင်းမှ ပြီးလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်.. ဟုတ်တယ်လေ ရှင်ကလဲ မရှင်းမရှင်းနဲ့..... ဆရာဝန်တွေကို ဆော်သလိုလိုနဲ့ ဆရာဝန်တွေဘက်က ပါသလိုလိုနဲ့...နောက်ဆုံးတော့ ရှင်က ဒေါက်ဒေါက်မဖြစ်ဘဲ ဆိုက်ကားဆရာ ဖြစ်ပါလေရော....သူပြောတဲ့ " ကျုပ်ထက်သာတဲ့လူဖြစ်လို့ကတော့အပြစ်ကို မရမက တင်မှာဘဲဆိုတာ တို့ ၊ ဆရာဝန်တွေက ဓားပြတွေတို့ ဆိုတာတွေဟာ " ဆရာဝန်တွေကို ပြောတာမဟုတ်ဘဲ.. ဒီထဲမှာ ဆရာဝန်တွေ မကောင်းဘူးလို့ပြောနေ ရေးနေတဲ့ comments ရေးသူတွေကို ပြန်လည် နှိပ်ကွပ်ထားတာပါ ဆိုတာလည်း ကျွန်မ အထင်လွဲတာဘဲဖြစ်မှာပါ.... ကျွန်မက မြန်မာစာ နည်းနည်းညံ့တယ်ရှင်... ကျန်တဲ့ ဘာသာမှာ ထူးချွန်လားဆိုတော့လည်း ဘယ်နေရာမှ မထူးချွန်ပါ.. ခပ်ညံ့ညံ့ဘဲ ကောင်းပါတယ်..
ကဲ... ရှင်းလိုက်ပါ ကိုသာဂိရယ်...ကြားထဲက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်... ရှင်က ရွာဦးကျောင်းမှာ ကောင်းကောင်းမနေဘဲ အင်တာနက် ဆိုတာကြီးပေါ်တက်ပြီး စာရေးချင်တာကိုး... ခုတော့ ရှင်းတော့ပေါ့......
မ violet ခင်ဗျား....
ကျွန်တော်ထင်တာကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှ ထိခိုက်စေလိုတဲ့သဘောမပါပါဘူး။ အခု William Thargi ဆိုတာက ဆရာဝန်မဟုတ်ဘဲ ကိုရင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်သူ့ကိုရေးထားတာတွေဟာ တော်တော်လေးကိုရင့်သီးသွားပါပြီး။ ဒါကလည်း ကျွန်တော့်အနေနဲ့စိတ်ကသိကအောင့်ဖြစ်နေချိန်မှာ ရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက်ပါ။ အခု ကိုရင်ကိုပြစ်မှားမိတော့ ကျွန်တော်ငရဲကြီးပြီးပေါ့။ ဒီအတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ မ violet ပြောသလို ကျွန်တော်ဟာပညာရှိ တစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ပါ။ မ violet ပြောသလိုသူက ဆရာဝန်တွေဘက်က၀င်ပြောတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တော့လုံးဝကိုမထင်မိပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့စာဖတ်အားနည်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မ violet ကိုညံ့တယ်လို့ပြောခြင်း၊ ဆိုလိုခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ စကားမှာ မ violet ကိုထိခိုက်မိသောစကားများ ပါဝင်သွားပါကတောင်းပန်ပါတယ်။
ကိုရန်နိုင်က ကျွန်မကို ညံ့တယ် မပြောပါဘူး.. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၀န်ခံတာပါ.. ကိုရန်နိုင် မက်ဆေ့ကလဲ ကျွန်မကို ထိခိုက်စေတာမျိုး မရှိပါ.. ကျွန်မကသာ မနေနိုင်ဘဲ ၀င်ပြောမိခြင်း သက်သက်ပါ.. ကျွန်မအထင်ကို ပြောမိခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်.. ကိုသာဂိဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ဆိုတာကိုလဲ မသိပါဘူး... သူကိုယ်တိုင် အသိဆုံးသာဖြစ်မှာပါ.. အကောင်းဆုံးကတော့ သူကိုယ်တိုင် ၀င်ရှင်းပြရင် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ ..မအားလို့ထင်ပါရဲ့ ပေါ်မလာသေးဘူးရှင့်.. ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ထားလိုက်ပါတော့ရှင်..သူ့အတွက်နဲ့ ထပ်ပြီး အငြင်းမပွားတော့ပါဘူး.. စာဖတ်အားနည်းတယ်ဆိုတာ ကျွန်မကိုယ်ကို ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. ကိုရန်နိုင်ကို မဆိုလိုပါ...ကိုရန်နိုင် ပြောတာတွေလဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်သလို ကျွန်မကလဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ မတိုက်ခိုက်ပါ.. ကဲ..ဒီတော့ ဒီလောက်နဲ့ ဒီကိစ္စ ကြေအေးကြပါစို့... ကိုသာဂိအကြောင်း ကျွန်မထပ်မပြောတော့ပါ.. စိတ်တိုလို့ဒေါသထွက်လို့ စသဖြင့် ဘာတစ်ခုမှ မဟုတ်ပါ.. ဒီကိစ္စနဲ့ အပြန်အလှန်ဖြစ်နေတာကို မဖြစ်သင့်ဘူးထင်လို့ပါ.. မှားတာရှိရင် ခွင့်လွတ်ပါရှင်...
[သင်းတို့ ဒေါက်ဒေါက်တွေလောကမှာ အရိုအသေပေးတဲ့ သဘောနဲ့ “မမ” တပ်ခေါ်ကြတာ သတိထားမိ ပါတယ်။ ပိုပြီး လေးစားသမှုကိုပြချင်ရင်တော့ မာမီ၊ အမေ စသဖြင့် သုံးတာ လည်း တွေ့ဘူးပါတယ်။ ဒီ ဘလော့ ကလည်း ဆေးလောက နဲ့ ဆိုင်တဲ့ နေရာဆိုတော့ သင်း တို့ လိုလိုက်ပြောကြည့်တာပါ။ အင်း … “အန်တီ”ဆိုတာကတော့ “မမ” နဲ့ “အမေ” ကြား၊ (ကားပွဲစားတွေပြော သလို) ကြားချ လိုက်တာပါ။
ဤ ကားစကားချပ်။ ]
အိုင်ဆေး ကျုပ်က မအားတာတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး ဗျာ၊ အန်ကယ် ရန်နိုင် ရေးတာတွေတွေ့ ပါတယ်။ ထပ်ရှင်းစရာမလိုတော့ဘူး ထင်လို့ပါ၊ ပြောရရင် ဒီဘလော့ ကို အရင်က သိပ်မရောက် ဖြစ်ဘူးဗျ အခု SSC Gate ဖြစ်ပြီးမှသာ ကဒီးကဒီး ရောက်ဖြစ်တာပါ အထူးသဖြင့် comment တွေ feedback တွေကို စိတ်ဝင်စားလို့ ပါ။ comment တွေကိုဖတ်တော့ မှ လူတွေ comprehension အားနည်းတာ ကို သတိထားမိပါတယ်။ စစ်တုရင်ကစားသမားတွေပြောကြသလိုပေါ့ မတတ်တာကို သင်ပေးလို့ ရတယ် မမြင်တာကို သင်ပေးလို့ မရဘူး ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေကြတာဗျ။ ဆိုတော့ကာ ဘာမှ သိပ်ပြောစရာ မလိုတော့ ဘူးထင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်ပါ။
အင်း ရှင်းကြေးဆိုရင်တော့ အန်တီ(ပန်း)ခရမ်း ရေးထားတာ တစ်ခုတော့ ကျုပ်က ရှင်းချင်တယ်၊ ကျုပ် ရွာဦးကျောင်း ဘက်မရောက်တော့တာ ကြာလှရှိပြီဟာကို၊ အစကတည်းက ကျုပ်က ရွာနောက်ကထန်းတော နဲ့ သာပိုနီးစပ်ခဲ့တာပါ။ (အခု လို ဆောင်းမှာ လယ်ကြွက်ကြော် နဲ့ ပင်ကျနဲ့ ဆိုရင် လွှတ်ဂွတ်ပေါ့) အန်ကယ် ရန်နိုင် ရေ ကိုရင်ဝီလျှံ ဆိုတာ ထန်းတောမရောက် ရင် ကဇော် ဆိုင်ရောက်တတ်တာပါ ဘယ်လိုပြောပြော ရင့်သီးတယ် လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ဟဲ ဟဲ နောက်တခုကတော့
အန်ကယ် ရန်နိုင် စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်
အိုင်ဆေး၊ ကျုပ်ရေးထားတဲ့ တခြား (ပက်ပက်စက်စက်) comment ကလေးတွေကို link
ပေးလိုက်ပါတယ်။ အန်ကယ် ရန်နိုင် ခင်ဗျား ဖြစ်နိုင်ရင် အခုလိုဘဲ အမြင်ကျယ်ကျယ် နဲ့ မေတ္တာရှေ့ထားပြီး ဝေဖန်ပေးပါဦး။
ဟုတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုး (တာဝန်ယူမှု အသိစိတ်) ရှိမှုနည်းပါးတဲ့ ဆရာဝန်ထံ ပြသမိခဲ့တဲ့ လူနာရှင်များသာ မှားတာပါ။
တာဝန်ယူမှုအသိစိတ်ဆိုတာ တာဝန်ယူတတ်တဲ့သူ ဆီမှာသာ ရှိတာပါ။ တာဝန်မယူတတ်တဲ့ သူဆီမှာ ဒီလိုစိတ်မျိုးမရှိပါဘူး
ဒီလိုနည်းနဲ့ လူနာတော်တော်များများဟာ ရောဂါ အမည်မဖော်နိုင်ဘဲ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဆရာဝန်လူတန်းစားဟာ ထိပ်ဆုံးမှာ နေရာယူလျှက်ရှိနေဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် တာ ၀န်ယူမှု အသိစိတ်ကတော့ ယနေ့အထိ ပြောင်းလဲမှု မရှိနိုင်ပဲ နောက်ဆုံးနေရာမှာ ရှိနေတုန်းပါဘဲ ။
ဟုတ်ပါတယ် ။ ဒီလိုပါဘဲ ။ တာဝန်ယူမှု အသိစိတ်မရှိတဲ့ ဆရာဝန်တွေလည်း မရှိသင့် တော့ ပါဘူး ။
ဒီလို တာဝန်ယူစိတ်မရှိတဲ့ ဆရာဝန်စိတ်ထားမျိုးကို လည်း ဖျောက်သင့်ပါပြီ ။
ဒီလို စိတ်ထားဆက်ထားနေဦးမယ်ဆိုရင် သားသတ်သမား တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထားနဲ့ မခြားနား တော့ပါဘူး ။
ဒီလောက်တောင်မှ ဆရာဝန်တွေကိုေူပာနေုကတဲ့သူတွေ..သူတို့နေမကောင်း ဖြစ်ယင်ဘာ ဆက်လုပ်ုကမလဲဆိုတာ သိချင်လိုက်တာ။ လောကုကီးမှာ အဆိုးပဲူမင် တတ်တဲ့သူတော်တော်များများ ရှိနေတာပဲနော်။ သိပ်ကိုပဲ မကျေနပ်နေဘူးဆိုယင် နည်းလမ်းရှိပါတယ်..... ကိုယ့်ဘာသာ ဆေးပညာလေ့လာ (ကိုယ်တိုင်ပဲသေချာတယ်လို့ထင်ကြတာမဟုတ်လား)...ကိုယ့်အရည်အချင်းကိုယ်ယုံကြည်ပြီဆိုယင် (၀ါရင့်ဆရာကြီးတွေ ကို မယုံကဘူး မဟုတ်လား)..ဆေးခန်းဖွင့်( အထူးကုဆေးခန်းတွေကဈေးကြီးလို့ပါ)...အခမဲ့မဟုတ်ယင်တောင် စရိတ်နည်းနည်းပဲယူ။ သူများကို သံယောင်လိုက်ူပီး ဘေးထိုင် ဘုပဲေူပာ ဘာမှလုပ် အာကျယ် အူပစ်တင် နေမယ့်အစား ကိုကိုယ်တိုင်ထလုပ်လိုက်ပါလို့ အုကံပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုကိုယ်တိုင်က ဘာမှလုပ်နိုင် ယင်တော့ သူများအပြစ်သိပ်မပြောတာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာကို သူများတွေလုပ်တယ်....အေုကာင်းရှိယင်အကျိုးရှိပါတယ်။ သိပ်ညံနေတဲ့ခင်ဗျားတို့တွေရော ဘ၀မှာ သူများအပြစ်တင်ခံရတာ မရှိဘူးဖူးလား။ ပြောချင်ရာပြောလိုက်တာပါ။ သိပ်ညံနေလို့။ ပြောချင်တာလဲပြန်ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တာဝန်ယူစိတ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သေသေချာချာ သဘောမပေါက်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
တာဝန်ယူလိုစိတ်ဟာ ဆရာဝန်တွေနဲ့သာ သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး ။ လူတိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင် တဲ့ စကားလုံး ဖြစ်ပါတယ် ။
ဥပမာဆိုပါတော့ - အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဟာ အဆောက်အဦးတစ်ခုကို ဆောက်ပီဆိုရင် အဆောက်အဦးပြီးစီးတဲ့အထိသာ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးမှာတာဝန်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ တစ်ချိန်မှာ အဲဒိ အဆောက်အဦး အချိန်မတိုင်မီပြိုကျပျက်ဆီးသွားခဲ့ရင် တာဝန်ယူတဲ့ အင်ဂျင်နီယာမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အဲဒိ အချိန်ကျမှ ဘိလပ်မြေက စံချိန်မမှီလို့ ၊ မြေအနေအထားမကောင်းလို့စတဲ့ ဆင်ခြေများကို လက်မခံပါဘူး။ စတင်ဆောက်လုပ်ကတည်းက လိုအပ်ချက်တွေကို တွက်ချက်ပြီး ပြင်ဆင်ထားရမှာ သူ့တာဝန်ပါ ။ ဒါဟာဥပမာတစ်ခု အနေနဲ့ပြောတာပါ။ တစ်ခြားသော အလုပ်တွေမှာ လည်း သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ တာဝန်ယူမှု အသိစိတ်တွေ ရှိပါတယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ ။
မြန်မာပြည်မှာ ဆရာဝန်တွေမှ တော်တာမဟုတ်ပဲ အခြားသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတွေ မှာလည်း လူတော်တွေ အများကြီးရှိကြပါတယ်။
နေမကောင်းရင်တော့ ဆရာဝန်ပြဖို့ ဆေးခန်းတော့ သွားရမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် လူတော်လူကောင်း ဆရာဝန်ထံကိုပဲသွား ပြဖြစ်မှာပါ ။ တစ်ယောက်မှားတာ အများမှားတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ တာဝန်ယူစိတ် အပြည့်ရှိတဲ့ ဆရာဝန်တွေ မြောက်မြားစွာ မြန်မာပြည်မှာရှိနေပါတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီက လည်း အမှန်တရားအတိုင်းဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် ။ မှားယွင်းဆုံးဖြတ်မှုအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကိုလည်း ချမှတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် ။
အမှန်တရားကို ဘာနဲ့မှ ဖုံးကွယ်ထားလို့မရနိုင်ပါဘူး။